Posted by စိမ်း... 1.9.09
ပိုးဟေသီ……. သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အိမ်နီးနားချင်း သူငယ်ချင်း… သူတို့အိမ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က တစ်လမ်းတည်းဗျ.. လမ်းဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်… အဲ အချိန်ပြည့်ဗျာ သူနဲ့ကျွန်တော်က တတွဲတွဲ… သူ့အစ်မမိုးမေသီနဲ့သူနဲ့က ငါးနှစ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတော့ သိပ်အတွဲမညီဘူး… ကျွန်တော်နဲ့ပဲ ကစားဖော် ကျောင်းသွားဖော်ပေါ့… ကျွန်တော်ကလည်း တစ်ဦးတည်းသောသား… အဖော်မက်တယ်လေ… အိမ်နီးနားချင်း ရွယ်တူဆိုလို့ သူပဲရှိတာ… ငယ်ငယ်ကဆို ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်တွေ့ချင်ရင် အိမ်မှာလာမရှာနဲ့… သူ့အိမ်သာတန်းလာခဲ့ အချိန်မရွေးပဲ… သူ့အိမ်က ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့… အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်တွေလည်းရှိတယ်… နောက် တလင်းကွင်းညီညီလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကစားကွင်းဖြစ်ရတာ မဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ… နောက်ပြီး လူကြီးတွေမျက်စိအောက်မှာလည်းဖြစ်တယ်လေ… သူနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သတ်မှုကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပဲဗျာ… ခင်ဗျားတို့လည်း သိမှာပါ… ဘာမှမထူးဆန်းဘူး… ငယ်ငယ်တည်းက သူငယ်ချင်း … လူကြီးတွေလည်းသဘောတူတယ်… အချိန်တန်ရင်ပေးစားမှာ… ဒါပဲ… ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း ငယ်ငယ်လေး အဲ ငယ်ငယ်လေးဆိုတာ လူပျိုဖော် အပျိုဖော်ဝင်ကတည်းက လူကြီးတွေ ထုတ်မပြောသော်လည်း ကိုယ့်ဘာသာသိနေတာပေါ့ဗျာ… အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သူက ကျွန်တော့်အတွက်လို့ပဲ အလိုလိုသိနေရော… သူလည်းအဲ့လိုပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ… ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူဘာအရောင်ကြိုက်တယ် ဘာအစားအစာကြိုက်တယ် သူ့အကျင့်တွေ အကုန်ကျွန်တော်သိတယ်ဗျ… သူလည်းကျွန်တော့်အကြိုက်သိတယ်… ဒါပေါ့ တစ်ချိန်လုံး အတူတူရှိနေတဲ့လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိတာ ဆန်းမှမဆန်းတာ… ဆယ်တန်းတုန်းကလည်း ကျူရှင်တူတူ… အောင်တော့လည်း အတူတူ… တစ်ယောက်မှ ဂုဏ်ထူးမပါဘူး… ရိုးရိုးအောင်… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ မေဂျာကွဲသွားတယ်… သူက သင်္ချာ.. ကျွန်တော်က ဘူမိဗေဒ… အဲ့တော့ အရင်ကလို တစ်ချိန်လုံးတပူးတွဲတွဲမဟုတ်ပေမယ့်… ကျောင်းသွားချိန် ပြန်ချိန်နဲ့ အတန်းအားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေတာ အခု တတိယနှစ်ရောက်တဲ့အထိပဲဆိုပါတော့.…
သူ့အတန်းဘက်ကို ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ လမ်းမှာ ဆီးသီးရောင်းတဲ့လှည်းတွေ့တာနဲ့ သူကြိုက်တတ်တာကို သတိရပြီး ကျွန်တော် ငံပြာရည်နဲ့ ငရုတ်သီးမှုန်နဲ့နယ်ထားတဲ့ ဆီးသီး အစိတ်ဖိုးဝယ်လာခဲ့တယ်… သူ့အတန်းရောက်တော့ သူ့တို့အတန်းဆင်းတာနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံတော့ ကျွန်တော်လည်း သူဝမ်းသာပါစေဆိုပြီး အပြေးတပိုင်းနဲ့ ဆီးသီးထုတ်ကိုထိုးပေးတာပေါ့…
``ပိုး… ရော့… ဆီးသီးငံပြာရည်… ´´
ကျွန်တော်ထင်ထားသလို သူဝမ်းသာမသွားဘူးဗျ... တအံ့တသြနဲ့ မျက်စိမျက်နှာတွေကလည်း ပျက်လို့ … နောက် သူ့ဘေးက ငနဲကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်… ကျွန်တော်လည်း သူကြည့်တဲ့ဘက်လိုက်ကြည့်တော့ ငနဲက အောင်မာ ကျွန်တော့်ဆီးသီးထုတ်ကို ရွံစရာတစ်ခုလို နှာခေါင်းရှုံ့တယ်… ငတိမကလည်း…
``ဟမ်… ငါမကြိုက်ပါဘူး ငံပြာရည် … ဘယ်တုန်းကစားလို့လဲ…´´
ဟောဗျာ မိန်းမတွေများ အပြောင်းအလဲမြန်တယ်ဆိုတာ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်စာထဲသာ ဖတ်ဖူးတာ အခုမှ ကိုယ်တွေ့ဗျာ… အရင်တုန်းကတော့ သူပဲ ကြိုက်လှပါချည်ရဲ့ဆိုပြီး ဆီးသီးကုန်ရင်တောင် ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ထဲက ငံပြရည်တွေ လက်နဲ့ထိုးထိုးပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုတ်နေတာ… အခုမှ မယ်မင်းကြီးမက အချိုးတွေဘာတွေပြောင်းလို့ … သူပြောင်းတာကလည်း ချက်ချင်းကြီး… တော်တော်လေး အောင့်သီးအောင့်သက်နိုင်သွားတယ်… ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်က စေတနာနဲ့အလိုက်တသိ သူစားပါစေတော့ ဆိုပြီးဝယ်လာတာကို ဒင်းက မတူသလို မတန်သလို ကိုယ်ကပဲ သူ့ကိုကြောင်ချင်လို့ဝင်ရောသလို … စိတ်ရှိလက်ရှိသာဆို ငတိမခေါင်းကို ဒေါက် ခနဲနေအောင် ခေါက်ချင်တာ … အဟုတ်… လူကြားထဲမှာမို့လို့ပေါ့ဗျာ… ခင်ဗျားတို့လည်း ကျွန်တော့်နေရာမှာဆို ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲ… လောင်းရဲတယ်ဗျာ… သူ့ဘေးက ငနဲကလည်း ကျေနပ်သလို အပြုံးကြီးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အောင်နိုင်သူလို ပြုံးပြနေလိုက်တာများ… သွားတွေကျွတ်ထွက်သွားအောင် ထိုးပစ်လိုက်ချင်တာ…
``သြော် ပြီးတာပဲလေ… ညနေ ငါ အောင်ကိုနဲ့သွားစရာရှိသေးလို့ နင့်ဘာသာပြန်လိုက်တော့ အမေကြည် မေးရင် သေချာပြောပြလိုက်နော်… ညမှ လာခဲ့မယ်လို့ သိလား… ´´
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်…ပိုး ခေါင်းညိမ့်ပြတယ်ထင်တာပဲ သေသေချာချာတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး… သူ့မျက်နှာက ကြောင်အိမ်ကထဲ ငါးဖယ်ကြော်ခိုးစားတာ လူမိတဲ့ ကလေးလိုပဲ… တစ်ခုခုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေပုံပေါ်တယ်… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်အားတော့ဘူး ဟုတ်တယ်လေ သူ့လုပ်ပေါက်က ဟုတ်မှမဟုတ်တာ…
ဒီကောင် ဘယ်ကကောင်ပါလိမ့်… အရင်က ပိုးနားမှာ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး…. ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်အတူတူတွဲသွားတွဲလာ လုပ်နေတာ ဒီကောင်မသိဘူးလား… ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ကပဲ ဒီကောင်ပိုးနားမှ ၀ဲနေတာကို မသိတာလား… ဒါ့ထက် ငနဲရုပ်က မဆိုးဘူးလုိ့ပြောလို့ရတယ်…. ကျွန်တော် ယောက်ျားအချင်းချင်း သိပ်မကြည့်တတ်ပေမယ့် ဒီကောင်က အသားလတ်လတ်ဗျာ… ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရည်ရည်မွန်မွန်… ၀တ်တတ်စားတတ်… ဒါနဲ့ပဲ ဟို ငတိမ ပိုးဟေသီက ဖြစ်ပျက်နေပုံများ… ကျွန်တော်တွေးရင်းတော်တော်အသည်းယားလာတယ်… ဒေါသလည်းထွက်လာတယ်.. တစိမ့်စိမ့်တွေးလေ ဒေါသကထွက်လာလေပဲ… ပိုးဟေသီဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော့်စကားတစ်ခွန်းကို ဘယ်တုန်းကမှ ပြန်လှန်ရဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး… ဟုတ်တယ်… သူ့မိဘတွေကအစ ကျွန်တော့်ကို အာဏာကုန်လွှဲအပ်ထားတာ… သူ့အိမ်စည်းရိုးကျော်တာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူ့အုပ်ထိန်းသူပဲ… ဒါကို တစ်လောကလုံးသိတယ်… ပိုးဟေသီကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်… ကျွန်တော်ဟာ ပိုးကို သူအပျိုဖော်ဝင်ပြီဆိုကတည်းက ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေနဲ့ တွဲတာလာတာကအစ နေရာတကာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်စောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ကောင်ပါ… ကလက်တက်တက် ခပ်ကဲကဲတွေဆိုရင် သူ့ကိုပေးမပေါင်းဘူး… အထီးတွေဆို ပိုဆိုး… ယောင်လို့ မျက်လုံးတောင် မကစားနဲ့… ကျွန်တော့်လက်သီးမိုး ဒီကောင်တွေမျက်နှာပေါ်ရွာပြီးသားပဲ… အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ရုံးခန်းရောက်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ဘူး… ဒီကောင်တွေ ဒီလောက်မိန်းကလေးတွေအများကြီး ဘာလို့ မိပိုးကိုပဲ လာလာဝဲနေမှန်း စဉ်းကို မစဉ်းစားတတ်ဘူး…
ပိုး မိဘတွေကလည်း သားသမီးကို ငယ်ငယ်တည်းက မိဘစကားနားထောင်တတ်အောင်… ရိုသေတတ်အောင်… ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေတတ်အောင် သေချာသင်ထားပေးတာဗျ.. အဲ့ဒါတစ်ခုတော့ ကျွန်တော် အမေကြည့်ကို တော်တော်လေးစားတယ်ဗျ… (အမေကြည်ဆိုတာ ပိုးတို့မေမေလေ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သားအရင်းလိုချစ်တယ်… ချစ်တာမှ သူ့သမီး အပိုင်သာပေးထားတာ ကြည့်ပေတော့… ) ပိုးတို့ဖေဖေကတော့ စီးပွားရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ထားတယ်… သမီးနှစ်ယောက်ကိစ္စတွေကိုတော့ ပိုးတို့မေမေကပဲ စီမံရတာပေါ့… မိဘစကားဆိုတာ မြေ၀ယ်မကျနားထောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသိဟာ ပိုးဟေသီတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အသွေးထဲ အသားထဲမှာ သံမှိုနဲ့နှက်ထားသလိုစွဲနေပြီးသား… ပိုးမေမေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ဖို့… အမြဲမှာထားတာဆိုတော့ ပိုးဆိုတာ ကျွန်တော် သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ပဲ… ပိုးက ငယ်ငယ်ကတည်းကရေခဲချောင်းဆို သေလောက်အောင်ကြိုက်တာဗျာ… ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က မစားနဲ့ဆို သူမစားရဘူးပဲ… စားကြည့်ပါလား ကျွန်တော်က ပြန်တိုင်တာပေါ့….သူကချောင်းဆိုးလွယ်တယ်ဗျ အအေးစာ နည်းနည်းစားတာနဲ့ ချောင်းတန်းဆိုးတော့တာပဲ.. နောက်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ သူချောင်းဆိုးရင် အကြာကြီးရယ် နှစ်ပါတ်သုံးပါတ်လောက်ကြာတတ်တယ်... ကျွန်တော်တိုင်ရင် သူ့အမေနဲ့… သူ့အမက သူ့ကိုဆူရော … သူ့အမေနဲ့တင် ကိစ္စကပြီးရင်တော်ရဲ့ မတော်လို့များ… သူ့အဖေသိသွားကြည့်… ပွဲကပြတ်ကရောပဲ… တစ်ပါတ်စာ မုန့်ဖိုးသွားလေရော့ပဲ.. အဲ့ဒါကြောင့် ပိုးက ကျွန်တော့်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြောက်ရပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်သနားလို့ ခွင့်ပြုမှ သူရေခဲချောင်းစားရတာ… အဲ့ဒီအခါမျိုးဆို သူပျော်နေတာများ… ခင်ဗျားတို့ကို ပြချင်တယ်… ပါးစပ်ကို မစေ့တော့ဘူး သွားကြီးကိုဖြီးလို့… ရေခဲချောင်းကြီးလိုက်လိုက်… ကျွန်တော်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံတိုင်း ဇက်ကလေးပုပုပြီး သွားဖြဲပြနေတာ… ခုခေတ် ကိုးရီးယားမင်းသမီးတွေအတိုင်းပဲ… သူ့မျက်လုံးတွေထဲက ကျွန်တော့်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အရိပ်အယောင်တွေကို ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်… ကျွန်တော်ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းအောင့်ထားရတယ်…
တကယ်တော့ ကျွန်တော် အောင်ကိုနဲ့လည်းချိန်းမထားသလို ဘယ်မှလည်းသွားစရာမရှိဘူး… ပိုးကို သက်သက်ပညာပြချင်လို့ တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တာ… ကျွန်တော်မပါပဲ တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်ရတဲ့ဒုက္ခကိုပိုးသိစေချင်လို့… သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ… ပိုးက အစစအရာရာ ကျွန်တော့်ကိုမှီခိုနေရတဲ့လူ… ကျွန်တော့်ကိုသူအားကိုးတယ် တွယ်တာတယ်… ကျွန်တော်မပါပဲ သူမိန်းကလေး အိမ်သာကလွဲရင် ဘယ်မှသွားရဲလာရဲတာမဟုတ်ဘူး… အခု ဘတ်စ်ကားကျပ်တဲ့ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဒင်းကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင် တစ်ယောက်တည်းပြန်ခိုင်းလိ်ုက်တာ… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထင်တာ တက်တက်စင်အောင်လွဲသွားတယ်… ကျွန်တော်ပိုးဘတ်စ်ကားစီးမယ့် မှတ်တိုင်ကို မြင်ရတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ ငတိမအခြေအနေကို ထိုင်စောင့်ကြည့်နေတာ… ကျောင်းဆင်းချိန်ဆိုတော့ မှတ်တိုင်မှာ လူတွေကလည်း အုံလို့ပေါ့…
ကျောင်းဆင်းတော့ ပိုးကို မှတ်တိုင်ဆီလျှောက်လာတာတွေ့တယ်… နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုများတွေ့မလား တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့ သူရှာသေးတယ်… ကျွန်တော်သူမမြင်နိုင်တဲ့ ဆိုင်ထောင့်ဘက် အမှောင်ကျတဲ့နေရာနားမှာ ထိုင်နေတာမို့ ကျွန်တော့်ကိုသူမမြင်ဘူး… ခပ်ဝေးဝေးဆိုပေမယ့် ပိုး မျက်နှာသိသိသာသာကြီးငယ်နေတာကိုကျွန်တော်သိတယ်… ကျွန်တော်ရယ်ချင်သွားတယ်… မှတ်ထား.. ငါ့ကို အာခံချင်ဦး ပိုးဟေသီ… ဒါအကင်းပဲ ရှိသေးတယ်… ဒီအကြောင်းများ အမေကြည့်ကိုပြန်တိုင်လိုက်ရင် တစ်လစာလောက် မုန့်ဖိုးငတ်သွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ… ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် သဘောကျပြီး ကျွန်တော်ပြုံးမိသေးတယ်… ရုတ်တရက်ဗျာ… မှတ်တိုင်နားမှာ ကားတစ်စီးအရှိန်လျှော့ပြီးဖြတ်မောင်းသွားတာ တွေ့တယ်… နောက်တော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကားကိုရပ်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ဆင်းပြီး မှတ်တိုင်ဘက်လျှောက်လာတာတွေ့တယ်… ကိုယ့်ဆရာတို့သိပြီးသားပါ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး… နေ့လည်က ပိုးဘေးနားမှာတွေ့တဲ့ ငနဲပါပဲ… ကားက စူပါစလွန်းအဖြူလေးပါပဲ… ဝေးနေတော့ နံပါတ်မမြင်ရဘူး… ဒီကောင်ပိုးနားကိုလျှောက်လာတာတွေ့တယ်… ပိုးနဲ့သူနဲ့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာလဲ မကြားရလဲ ကျွန်တော်သိပါတယ်… ခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပါ… ကျွန်တော်ကတော့ ပိုးသူ့ကားနဲ့လိုက်မသွားဘူးဆိုတာယုံတယ်… လောင်းရဲတယ်ဗျာ… တကယ်လည်း ပိုးလိုက်မသွားပါဘူး… အဲဒီ့ငနဲ မှတ်တိုင်မှာ ကားမလာမချင်းရပ်စောင့်နေတာဗျာ… လူတွေကလည်း ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်နဲ့… ဟုတ်တယ်လေ သူသူကိုယ်ကိုယ် ကျောင်းသားသဘာဝ ဒါမျိုးတော့ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဗျ… ဘာလဲဟ ကားနဲ့ခေါ်တယ် မလိုက်ဘူး… သွားလည်းမသွားဘူး ရပ်စောင့်နေတယ်… စိတ်ကောက်နေတာလား… ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲ ပေါ့… နောက် ခဏနေတော့ ပိုးစီးမယ့် ဘတ်စ်ကားလာတယ်… ကျွန်တော် ပြေးလိုက်သွားမလို့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးရှင်းနေတုန်း ငနဲက ပိုးနဲ့တူတူ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်…. ကျွန်တော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာလည်း ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လို့မရတော့ဘူး… စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပလက်ဖောင်းအတိုင်းလျှောက်သွားနေမိတော့တယ်…ခေါင်းထဲမှာလည်း အတွေးတွေကလည်း စုံလို့ ….
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုကို အလုခံလိုက်ရသလိုပဲ ... ကျွန်တော့်အတွက် ``ပိုး´´ဆိုတာကလေ ဘိုင်နိမ်းနဲ့တပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ဆောင်ဗျ... ပိုးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ကျွန်တော်ပိုင်တာ... ပိုး... ပိုး အခုချိန်ဆို လူတွေကျပ်တဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ဟိုငတိနဲ့... လူတွေကျပ်လို့များ ပိုးနဲ့သူ အသားချင်းကပ်နေမလား... ပိုးကိုသူက ကာပေးသလိုနဲ့ လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကြား ရပ်စေမှာလား ကျွန်တော်တွေးရင်း ရင်တွေပူလာတယ် ကျွန်တော့် ခေါင်းတွေမီးတောက်လာတယ်... ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ဗျာ... ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ကုတင်ပေါ်ပစ်လှဲလိုက်တယ်... ရေလည်း ချိုးချင်စိတ်မရှိဘူး... မေမေက ထမင်းစားဖို့လာခေါ်တဲ့အထိ အိပ်ရာထဲမှာလဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ နေမကောင်းဘူးလို့တောင် ထင်နေသေးတယ်... ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီး ကျွန်တော် မေမေကျေနပ်အောင် ထမင်းဆင်းစားတယ် နောက်ပြီး အခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီး အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲနေလိုက်တယ်... ပိုး တို့အိမ်သွားရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားပေမယ့် မသွားရဲသလိုလို ပိုးကို မကြည့်ရဲသလိုလို ဘယ်လိုကြီးမှန်းကိုမသိဘူး... တကယ်ဆို ကျွန်တော်ဘာမှလည်း အမှားမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ကို ပိုးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့ ၀န်လေးနေမိတယ်... အင်း သူ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ဖို့ဝတ္တရားတော့ ပျက်ကွက်မိတာပေါ့လေ... အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပါ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်လိပ်ပြာမလုံသလိုဖြစ်နေတာ... ဒါပေမယ့် အမေကြည့်ကို ညနေလာခဲ့မယ်လို့ ပိုးနဲ့ စကားပါးလိုက်ပြီးသားလည်းဖြစ်နေပြန် ... ဒီနေ့သူ့သမီးကိုလည်း အိမ်ပြန်ပို့ဖို့ဝတ္တရားကလည်း ပျက်ထားတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားရှင်းပြမှ ဖြစ်မှာမို့လို့ အိပ်ယာထဲကနေလူးလဲထပြီး မေမေ့ကို ပိုးတို့အိမ်ဘက်သွားဦးမယ်လို့ လှမ်းအော်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်...
ပိုးတို့ သားအမိ ၃ ယောက်လုံး တီဗီလာတဲ့ ကိုးရီးယားကား ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်... ကျွန်တော်လာတာတွေ့တော့ ပိုးမေမေက တစ်ချက်ပဲလှမ်းကြည့်ပြီး ပြုံးပြတယ် နောက်သူ့ကိုးရီးယားကားပဲ သူအာရုံပြန်ရောက်သွားတယ်... ညနေက သူ့သမီးကို ကျွန်တော်ပြန်မပို့ခဲ့တာတောင် သူမသိတဲ့ပုံ ... ဒါမှ မဟုတ် ဟိုငနဲလာပို့တာကိုပဲ ကျွန်တော်လို့ထင်သွားသလား မသိ... ဟုတ်တယ်ဗျ. .တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်က ခြံပေါက်ဝထိလိုက်ပို့တယ်လေ ပိုးက ခြံတံခါးမကြီးနေ လူတစ်ကိုယ်ဝင်စာ အပေါက်ကလေးကနေ သူ့အိမ်ထဲ သူဝင်သွားတာ.. အိမ်ထဲကနေဆိုရင် သစ်ပင်ရိပ်နဲ့ဆို လိုက်ပို့တာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ သည်းသည်းကွဲကွဲမြင်ရတာ မဟုတ်ဘူး... ဒါပေမယ့် အရင်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လိုက်ပို့နေတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့်... အခု...အို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ပိုးကလည်း ဒီကောင့်ကို အိမ်ထိခေါ်ရလောက်အောင် သတ္တိမကောင်းဘူး ဟိုကောင်ကလည်း အဲ့ဒီလောက်ထိ အတင့်မရဲနိုင်လောက်ပါဘူး....
``အောင်ကိုအတင်းခေါ်လို့ လိုက်သွားရတယ်ဆို... သား...´´
ရုတ်တရက်မေးလာတဲ့ အမေကြည့် အသံကြောင့် ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်... ကြည့် ဒီကောင်မလေး ဒီလိုဆိုတော့လည်းကျွန်တော့် အပြစ်ပေါ့အောင် ဖာဖာထေးထေးပြောပေးတတ်သား.. မဆိုးဘူး...
``ဗျာ... ဟုတ် မေကြည်... သူ့ဘကြီးဆေးရုံတက်တာ လူနာသတင်းမေးလေ... ´´
``အေးပေါ့ လူမှုရေးကိုး... ပိုးပိုးတော့ ကားကျပ်လို့ ညည်းလိုက်တာ လွန်ရောပဲ... ခါတိုင်းတော့ မကျပ်တာကျနေရော... သားကို တစ်ချိန်လုံး အပြစ်တင်နေတာ လိုက်မပို့ရကောင်းလား ဆိုပြီး... ´´
``ဟုတ်... ဟဲ ဟဲ... ´´
ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်းသွားဖြဲပြနေလိုက်တယ် နောက်တော့ မေကြည်လည်း သူ့ကိုးရီးယားကားထဲ သူအာရုံပြန်ရောက်သွားတယ် သူတို့သားအမိတွေ ကြားထဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ပျင်းခြောက်ခြောက်ကြီး... သူတို့ကသာ ကိုးရီးယားကားကိုသဲကြီး မဲကြီး စိတ်ဝင်စားနေတာ ကျွန်တော်မှ မကြိုက်ပဲ... ၀င်ပြီးစကားဖြတ်ပြောလဲ ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး... ကျွန်တော်ဗိုက်မဆာပေမယ့်..
``မိပိုး ဘာရှိလဲ... ဗိုက်ဆာတယ်... ´´
ပိုးက ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်မှ လှမ်းမကြည့်ပဲ...
ကျွန်တော် နည်းနည်းတင်းသွားတယ် အနည်းဆုံးတော့ ဘာချက်တယ် ဘာရှိတယ် သူပြောသင့်တာပေါ့... ခုကြည့် လုပ်ပုံက ... ပိုးပိုး အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်ပေါ့...ကျွန်တော်လည်း နောက်ဖေးကို ထွက်လာလိုက်တယ် ထမင်းစားပွဲပေါ်က အုပ်ဆောင်းကိုလှပ်ကြည့်တော့ ငါးပိရည်ကျိုနဲ့ တို့စရာ ပန်းကန်ပဲတွေ့တယ်.. တကယ်ဆို သူတို့အိမ်မှာ ဒီအချိန် အကုန်လုံးထမင်းစားပြီးလို့ ဟင်းတွေလည်း ကြောင်အိမ်ထဲ ထည့်သိမ်းထားတာ ကျွန်တော်သိတာပေါ့... တမင်တကာ ကြောင်အိမ်ကို ဖွင့်မကြည့်ပဲ ထမင်းစားပွဲမှာဝင်ထိုင်ပြီး ပိုးကိုလှမ်းအော်လိုက်တယ်
``ပိုး....... ပိုးးးးးး ဘယ်မှာတုန်းဟ ဘာမှလည်း မရှိပဲနဲ့... ´´
``အဲ့မှာလေဟာ နင်ကလည်း နည်းနည်းပါးပါး ရှာပါလား... ´´
``ရှာတာပဲ ဘယ်မှာလဲ ဘာမှလည်း မတွေ့ဘူး...´´
``ပိုးပိုး သွားလုပ်ပေးလိုက်ဦး... သွား ... အိမ်မှာ ဟင်းမကောင်းဘူးထင်တယ် ... ´´
ပိုး အလိုမကျတဲ့မျက်နှာနဲ့ နောက်ဖေးရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းထိုးတယ်... နောက် ကြောင်အိမ်ကို သွားဖွင့်ပြီး လေသံတိုးတိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်
`` ဒီမှာလေ မမြင်ဘူးလား နင့်မျက်လုံးကန်းနေလား... အလကားနေ သူများကိုပဲ ခိုင်းချင်နေတယ်... နင့်အခိုင်းအစေများမှတ်နေလား ငါ့ကို...´´
``ပိုးပိုး ငါဗိုက်မဆာဘူး ရှိတဲ့ အသီးတစ်ခုခု ခွဲပြီး ခြံထဲယူခဲ့ ငါစောင့်နေမယ်...´´
ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ ကျွန်တော်ခြံထဲဆင်းခဲ့တယ်...
အမေကြည်နဲ့ မမိုးနဲ့က သတိတောင်ထားမိပုံမပေါ်ဘူးဗျာ သူတို့ ကိုးရီးယားရေယာဉ်ကြောမှာမြောနေတာ...
ကျွန်တော် ခြံထဲက ဒန်းပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်နေတယ် ခဏနေတော့ ပိုးကို သစ်တော်သီး ပန်းကန်တစ်ချပ်ကိုင်လို့ ကျွန်တော့ဆီလျှေက်လာတာတွေ့တယ်...
``ရော့..´´ ပိုးက သစ်တော်သီးပန်းကန်ကို ကျွန်တော့်ဆီထိုးပေးရင် ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်တယ်... ဒီကောင်မလေး ငယ်ငယ်က ဒန်းစီးရတာ သိပ်ကြိုက်တာပဲ... ပန်းခြံသွားတိုင်း ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ဒန်းလွှဲပေးခဲ့ရတာ မှတ်မိသေးတယ်...
``ညနေက ပြန်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား ပိုး..´´ကျွန်တော် ပိုးမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်...
ချက်ချင်းခေါင်းငုံ့သွားတယ်... နောက်တော့ အသံတိုးတိုးနဲ့
``တစ်ယောက်တည်းလား...´´ ကျွန်တော် ထပ်မေးလိုက်တယ်...
ပိုး မျက်နှာ သိသိသာသာကြီး ပျက်နေတယ်... ပိုး မလိမ်တတ်တာ ကျွန်တော်သိတယ်.. အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုပေါ့... မလိမ်ရဲတာ ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်... ပိုးမျက်နှာအရိပ်အကဲကိုကြည့်ရုံနဲ့ သူ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ... ပြောရင် ခင်ဗျားတို့ ယုံပါ့မလားမသိဘူး...
သူမကိုချောင်ပိတ်ပြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းဆိုတာ ပိုးလည်းသိတယ်... ကျွန်တော်ဟာ အဖြေမှန်ကိုသိပြီးသားပါ... ဒါဟာ ပိုးရဲ့ရိုးသားမှုကို စစ်ဆေးတဲ့မေးခွန်းဆိုတာကို ပိုးကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်...
``ဟို..ဟို.. သူက.... အတင်း...´´
သူ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ဖို့ အတော်ကြီး ကြိုးစားပန်းစားပြောယူနေရတယ်...
လရောင်အောက်မှာ ပိုးနဖူးပေါ်ကချွေးစက်ကလေးတွေ အရောင်လက်နေတာ ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်...
ကျွန်တော့်လေသံ နည်းနည်းမာသွားတာ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်...
``ကိုလင်းထွဋ်... စက်မှု ဖိုင်နယ် က... ´´
`` ၀ါဝါ မိတ်ဆက်ပေးတာ... သူ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲ´´
ကြည့်စမ်း တစ်ပါတ်လောက်ရှိပြီတဲ့... ကျွန်တော် တော်တော်ညံ့ပါလား... ပိုးနားမှာ ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးရှိနေပါလျက် ဒီကောင်နဲ့ပိုးသိတာ တစ်ပါတ်လောက်ရှိတာတောင် ကျွန်တော် ဘာမှ မသိရပါလား...
ကျွန်တော့်မေးခွန်းတွေက ပိုးကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်တဲ့ တရားခံကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေလို ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ...
``ဟို... ၀ါဝါက မပြောနဲ့တဲ့...´´
``တောက်.... ´´ ကျွန်တော် တော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်... ဒါ သက်သက် လူပါးဝတာ... ၀ါဝါရော သူ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲဆိုတဲ့ကောင်ရော ပိုးနဲ့ ကျွန်တော့ ပက်သတ်မှုကို သိသိကြီးနဲ့ လူမဆန်တာ... စည်းကျော်တာ... ပိုင်ရှင်မသိအောင် ခိုးစားချင်တာ... ကျွန်တော့် ဒေါသတွေ ပွက်ပွက်ဆူလာတယ်...
``မိပိုး ငါ့ကိုသေချာကြည့်စမ်း ငါဘယ်သူလဲ... ´´ ကျွန်တော် သတိလက်လွတ် သူ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လှုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဘက်ကို သူ့ကို အတင်းဆွဲလှည့်လိုက်တယ်...
ပိုး မျက်နှာက အခုပဲ ငိုချတော့မလို
``သြော်... အေး.. နင်သိသေးသားပဲ.. မင်းညိုစင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်း နင်သိတယ်နော်...ဒီမယ် ပိုးပိုး မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်း အတန်းတစ်ချိန် နင်ဖျက်ရလိမ့်မယ်...ငါလာကြိုမယ် စောင့်နေ...´´
ကျွန်တော်ပြောပြီး ထွက်ခဲ့တယ် ...အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သွေးအေးအေးနဲ့စဉ်းစားနေမိတယ်... ဒီအတိုင်းဆို အဲ့ဒီ လင်းထွဋ်ဆိုတဲ့ကောင်က ပိုးကို ကွေ့ပတ်သွယ်ဝိုက်ပြီးဝင်ရောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ် ... သူက ပိုးကို သဘောကျလို့ တည့်(ဒဲ့)ကိုဝင်လာတာ... ပြောရရင် တိုင်းသိပြည်သိ ကြေညာပြီးကျွန်တော့်ကို စိန်ခေါ်တာ...
ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ် မှောက်လိုက်လှန်လိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်တယ်... ဒီကောင် ပိုးကို ဘယ်လိုလက်လျှော့သွားအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ... ရုတ်တရက် ကျွန်တော် တစ်ခုခုကို သတိရသွားတယ်... အမှန်က ကျွန်တော် ပေါ့ပေါ့ဆဆ မေ့လျော့နေခဲ့မိတဲ့အချက်ပါ... ဟုတ်တာပေါ့ ဒါကြောင့်ပဲနေမှာ... ၀ါဝါဆိုတာ ပိုးနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းပဲ... ကျွန်တော်မသိသင့်တဲ့ မိန်းကလေးကိစ္စတွေကို သိနေတဲ့လူပေါ့... သူတို့က အတန်းချင်းလည်း တူတယ်လေ... ကျွန်တော်နဲ့ ပိုးအကြောင်းကိုလည်းသူအကုန်သိနေမှာပဲဗျ... ကျွန်တော်မေ့နေတာတစ်ခုက ပိုးဟာ ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာကို လူတိုင်းသိတာမှန်ပေမယ့် ကျွန်တော် ပိုးကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင် ရည်းစားစကားလည်းမပြောခဲ့ဘူးသလို မိဘတွေသဘောတူတယ်ဆိုတာကလည်း သတင်းစားထဲထည့်ဖို့မပြောနဲ့ ရပ်သိရွာသိအသိပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ... အမှန်တော့ ဘယ်သူမှလည်း အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိကြဘူး လုပ်ရကောင်းမှန်းလဲမသိဘူး... အော်တိုသိပြီးသားပဲလေ ဒီကလေးနှစ်ယောက် ကြီးလားရင်(ကျောင်းပြီးရင်)ပေးစားမယ်ဆိုတာ... ဒါပေမယ့် အခု အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး... ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကိစ္စကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာ... လူကြီးတွေကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်ဘက်ကသေချာဖို့ အဓိကကျတယ်.... ကျွန်တော့်ဘက်က သေချာဖို့ဆိုတာမှာ... ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် သမီးရည်းစားဖြစ်သွားဖို့က အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပဲ... အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော်တုံးမှန်းသိတော့တယ်.. ဘယ့်နှယ့်ဗျာ တစ်သက်လုံး ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တူတူရှိနေပါလျက်ကယ်နဲ့ ရည်းစားစကားပြောဖို့မေ့နေတယ်ဆိုတော့... ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော်အသုံးမကျမှန်း ခုမှသိလိုက်ရတယ်...
မနက်ကျရင် ပိုးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာပါလိမ့်... ရုတ်တရက် ပိုးမျက်နှာကို ကျွန်တော်ပုံဖော်လို့မရဘူးဗျ... သိလား.. ပိုး မျက်လုံးတွေက ဘာအရောင်ပါလိမ့်... ဒုက္ခပဲ တကယ်ကို မမှတ်မိဘူး... နောက်ပိုးမျက်ခုံးက လေးကိုင်းလို ကွေးကွေးလေးလား ဇင်ယော်တောင်လိုလား ဒါမှမဟုတ် ခပ်ပါးပါးလား ကျွန်တော်မသိဘူး... နောက် နှာတံ ပြားပြားကြီး ပွပွကြီး အဲ့လိုပုံဆိုးပန်းဆိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကလွဲလို့ ဘယ်လိုပုံဆိုတာ ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျ... ကျွန်တော် အလန့်တကြား ကုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်က ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို ဖွင့်ကြည့်မိတယ်... အခုမှ သတိရတာ ကျွန်တော့်မှာပိုးတက္ကသိုလ်စတက်ကတည်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှ မရှိဘူးဆိုတာပဲ... ကျွန်တော့ အယ်လ်ဘမ်ထဲက ပိုးဓါတ်ပုံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်က ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကျောင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာ အမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တွဲပုံလေးပါ... ဓါတ်ပုံထဲက ပိုးက အခု အပြင်က ပိုးနဲ့စာရင် အများကြီးငယ်သေးတာပဲ.. တကယ့်ကို ကလေးလေး... ပိုးမျက်လုံးတွေက သိပ်ကိုဖြူစင်တယ်... သူပြုံးပြနေတဲ့ပုံလေးကလည်း အရမ်းကို အေးချမ်းတယ်... ကျွန်တော်က ပိုးတစ်ဘ၀လုံး အဲ့ဒီလို အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ဖြတ်သန်းသွားနိုင်အောင် အတားအဆီးမှန်သမျှကို ဖယ်ရှာပေးမယ့် သူရဲကောင်းပေါ့... ပိုးရယ် နင့်အတွက်ငါ အမြဲတမ်း သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့သူပါ... ပိုးဘ၀မှာ ကျွန်တော်က မရှိမဖြစ်ဖြစ်နေစေရမယ်... သူ့အတွက်အရာရာကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်နေတော့တာပဲ.... ပိုးကို တစ်သက်လုံးက ကိုယ်ပိုင်တဲ့အရုပ်ကလေးလို ထင်နေရာကနေ တခြားလူတစ်ယောက် လုတော့မှာပါလားဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်တော့် အသိတရားတွေကို ပျက်ပြားစေတယ်... ကျွန်တော် ပိုးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး... ပိုးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ပဲ... ဒါကျွန်တော့်သစ္စာတရားပဲ... အဲ့ဒါ အချစ်လားလို့ မေးရင် ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပဲ အရှင်းဆုံး ၀န်ခံပါရစေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန် ပိုးကို ကျွန်တော်ရည်းစားစကားပြောမှာပါ... စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြရတာကို မနှစ်လိုတဲ့ကျွန်တော်ဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားဝင်ပြဌာန်းမထားတဲ့စည်းမျဉ်းစမ်းကမ်းအရ ... အရည်အသွေးအောင်လက်မှတ်မရသေးတဲ့ ချစ်သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် မနက်ဖြန်ဆက်မှာတော့ သေချာတယ်...
ကျောင်းသွားဖို့ ပိုးကို ကျွန်တော်သွားခေါ်တော့ သူခြံရှေ့ထွက်စောင့်နေတာတွေ့တယ်... ထုံးစံအတိုင်း ဘတ်စ်ကားကျပ်ကျပ်ကို တိုးဝှေ့စီးပြီး ကျောင်းကိုရောက်တော့ ... မနက်စာ ကင်န်တင်းမှာ အတူတူစားကြတယ်... ကျွန်တော်က နန်းကြီးသုပ်နဲ့ကျဆိမ့်...အဲ့ကောင်မလေး အခုထိကို မုန့်ဟင်းခါး ညှပ်ခေါက်ဆွဲ အိုးဘဲဥနဲ့စားတုန်း သူမို့ နေ့တိုင်းအဲ့ဒါကို မမုန်းပဲစားနိုင်တယ်... နောက်ပြီး သူကရေနွေးကြမ်း ခရေဇီ...ရေနွေးဆိုရင်လည်း သူက ရှိသမျှ ရေနွေးခွက်ကို အကုန်ကျင်း... ပြီးရင် အကုန်လုံးကို ညီနေအောင် တန်းစီသေးတာ ပြီးမှ ရေနွေးတွေတစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက်လိုက်ဖြည့် အဲ့ဒါပြီးမှ မုန့်ဟင်းခါးကို စားတာ ... သူလည်းမုန့်ဟင်းခါ စားအပြီး ရေနွေးတွေက သိပ်မပူတော့ဘူး ခပ်နွေးနွေးဆိုတော့ အဆင်သင့်သောက်ရုံပဲတဲ့... အဲ့ဒါ သူလုပ်နေကျ.... မုန့်ဟင်းခါးစားပုံကိုလည်း ပြောရဦးမယ်...လာချချချင်း မုန့်ဟင်းရည်က ပူတော့ သူကချက်ချင်းမစားနိုင်သေးဘူး .... အဲ့တော့ ပန်းကန်ထဲပါတဲ့ အိုးဘဲဥပေါ်ကို ဟင်းရည်တွေ ဇွန်းနဲ့ခပ်ခပ်ပြီးလောင်းချနေတာ ခင်ဗျားတို့ မျက်စိထဲ မြင်အောင်ပြောရရင် ကန်တော့ဗျာ ခွက်သေးသေးလေးနဲ့ ဘုရားရေသပ္ပါယ်နေသလိုပဲဗျာ အခေါက်ပေါင်းမနည်းဘူး အဲ့ဒါ ဟင်းရည် မအေးမချင်းလုပ်နေတာ... ကျွန်တော်က အစားမြန်သလောက် သူက အစားစားရင် ကြာတတ်တယ်... တစ်လုပ်လေက် ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး မကြေမချင်းဝါးနေတာ... မကြေပဲလည်း သူမျိုမချတတ်ဘူးဗျ... အဲ့လိုဆို နင်ပြီး ဂျို့ထိုးရော.. တစ်ခါတစ်လေသူစာအုပ်တစ်အုပ်ကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်နေခိုက်များဆို ကလေးတွေလိုပဲ ထမင်းတစ်လုပ်ပါးစပ်ထဲ ထည့်ထားပြီးရင် ၀ါးဖို့မေ့နေတတ်တယ် အဲ့အတိုင်းကြီးငုံပြီးစာဖတ်နေတာ ကျွန်တော်က သတိပေးမှ... ၀ူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ အတင်းဝါးပြီးမြိုချ... အဲ့လိုကောင်မလေးဗျ... ပိုးရယ်... လောကကြီးမှာ နင့်အကြောင်း နင့်အကျင့်တွေ ငါ့လောက်များ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာတဲ့လဲ... ကျွန်တော် ကျေနပ်သလိုပြုံးလိုက်မိတယ် ထင်တယ် ... ပိုးက
``ရယ်ပါတယ်... အခုပဲလေ... မလိမ်နဲ့...´´
``သြော် နင်အခုထိ ကလေးကလားလုပ်နေတာကို သဘောကျလို့...´´
``ဟမ်... ဒါကလေးကလားလား ကိုယ့်ဘာသာ ရေနွေးသောက်တာကို´´
``အတန်းတောင် ဖျက်ပြီး နင်ဘာပြောမလို့လဲ...´´
``သောက်မှာသာ သောက်ပါ နင့်ရေနွေး ပြီးရင် သွားမယ်...´´
``သြော် စပ်စုရန်ကော မိပိုးရယ် ခေါ်တဲ့နေရာသာ လိုက်ခဲ့... တိတ်တိတ်နေ... ´´
ကျွန်တော် သူ့ကို ကန်ပေါင်ဘက်ခေါ်လာတယ် ... ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ဒီလိုပဲ ကန်ပေါင်တစ်လျှောက် လေကတည်း တဖြူးဖြူးနဲ့ဆိုတော့ လမ်းလျှောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လျှောက်လာလိုက်တာ လူရှင်းတဲ့နေရာနားရောက်မှ အရိပ်ကောင်းကောင်းသစ်ပင်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်ကြတယ်... အမှန်က ကျွန်တော်ရပ်လိုက်တာပါ ကျွန်တော်ရပ်လိုက်တော့ သူလည်း ဆက်သွားလို့ ဘယ်ရမလဲ... ``ခဏထိုင်ရအောင်´´ လို့ ကျွန်တော်က ပြောတော့ ``အေး..´´ တဲ့..
ကျွန်တော်က သစ်ပင် အမြစ်ဆုံကြီးတွေမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်... ပိုးကတော့ သူ့လွယ်အိတ်လေး ကျွန်တော့ဘေးချပြီး ကန်ရေစပ်နားထိ လျှောက်သွားပြီးမှ ဖိနပ်ကိုသေသေချာချာချွတ် သူ့ခြေထောက်တွေ ရေနဲ့ထိနိုင်လောက်တဲ့နေရာရောက်တော့မှ ထိုင်ချပြီး ခြေထောက်တွေ ရေထဲတွဲလောင်းချပြီး ဆော့နေလေရဲ့... ပိုးက ရေကြိုက်တယ်... ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ခဏခဏဖျားတတ်လို့ သူ့ကို ရေပေးမဆော့ဘူး... အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်ပေါ့... ကျွန်တော်လည်း ရေကြိုက်ပါတယ် ... ရေကူးလည်း တတ်ချင်တယ်... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရေကူးရင် ပိုးလည်းကူးချင်ရှာမှာပဲလို့ တွေးမိလို့ ကျွန်တော်ရေကူးမယ့် အစီအစဉ်ကိုလက်လျှော့ခဲ့တယ်...
ဒီနေ့ပိုးက အ၀ါနုရောင် မိန်းမ၀တ်ရှပ်အကျီလက်စကနဲ့ လုံချည်က အညိုခံမှာ အ၀ါရောင် အပွင့်လေးတွေပါတဲ့ အဆင် ... ကျောလည်လောက်ရှိတဲ့ သူ့ဆံပင်ပျော့ပျော့တွေကို လိပ်ပြာပုံတစ်ဝက်ညှပ်ကလစ်လေးနဲ့ နောက်ဘက်မှာ ညှပ်ထားတယ် ... ခါတိုင်းပြင်ဆင်နေကျ အသွင်ပေမယ့် ရည်းစားစကားပြောမယ်လို့ အကြံအစည်နဲ့လာတဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ အရာရာ အားလုံး အသစ်ဖြစ်နေတယ် ... ပိုးက အသားဖြူဖြူ နောက် အရပ်က ငါးပေ နှစ်လက်မ တိတိ ... သူ့ကိုယ်လုံးလေးက ရှေ့ကကြည့်ကြည့် နောက်ကကြည့်ကြည့် ဘေးက ကြည့်ကြည့် ကြိုက်တဲ့ အန်ဂယ်ကကြည့် ဆလင်ဒါပုံလေး တကယ်ပြောတာ... သူများတွေပြောတော့ ငါးရံ့ကိုယ်လုံးတို့ဘာတို့ ကျွန်တော်တော့ ဆလင်ဒါပုံပဲမြင်တယ်...
ကျွန်တော့်ခေါ်သံကြောင့် သူမ ဆတ်ခနဲ့ လှည့်ကြည့်ပြီး ဘာလဲဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးဆတ်ပြတယ်...
``ဘာမှ မဟုတ်ဘူး... နေမပူဘူးလားလို့...´´
``ဟေ့အေး... မပူပါဘူး...´´ ဆိုပြီး ပြန်လှည့်သွားတယ်..
ဟုတ်ပါတယ် နေမပူပါဘူး သိသားပဲ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ ထိုင်နေတာ ဘယ်လိုလုပ် ပူမှာလဲ... ကျွန်တော်က ကိုယ့်အကြံအစည်နဲ့ကိုယ်ခေါ်တာ တွေ့လား အဲ့ဒီ ငတိမလေးက ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး... အခုကျွန်တော် သိလိုက်ပြီလေ...
ပိုး မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်လိုအနက်လည်း မဟုတ်ဘူး အညိုရင့်ရောင်.. နောက် ပိုးမျက်တောင်တွေက သိပ်တော့မရှည်ဘူး ဒါပေမယ့် ထူထူထဲထဲနဲ့ ကော့နေတဲ့ အမျိုးအစား... သူ့မျက်ခုံးတွေက ဇင်ယော်တောင်ပုံဗျ... ခုမှ သိတယ်... ပုံမသွင်းထားပဲ သဘာဝအတိုင်း ဇင်ယော်တောင်ပုံပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ထင်တယ် မိတ်ကပ်ပြင်ဆရာတွေဆိုရင်တော့ ပိုးမျက်တောင်အဖျားဘက်ကို နည်းနည်းသွယ်သွားအောင် ဓါးနဲ့ တိပစ်မလားပဲ...... ကျွန်တော်သာအနားမှာဆို မလုပ်ဖို့တားမှာပဲ... အယ် စကားကလွဲပြန်ပြီ... နှာတံတော့ သွယ်သွယ်လေးမဟုတ်ဘူး အဖျားဘက်မှာ လုံးလုံးလေးနဲ့ အရင်းတော့မဆိုစလောက်လေး ပြားတယ်လို့ပြောရမယ်... နောက် နေပူပူ မပူပူ ပိုး နှာသီးဖျားလေးက အမြဲတမ်းချွေးထွက်တတ်တယ်ဗျ... အဲ့ဒါတော့ ငယ်ငယ်တည်းက ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်... ငယ်ငယ်ကဆို နွားသေလို့ဝင်စားတာ ဆိုပြီး ကျွန်တော် အမြဲစခဲ့တာပေါ့... သူမ နှုတ်ခမ်းတွေက ပန်းနုရောင်သန်းပြီးတော့ ထူထူထဲထဲရှိတယ်... အမြဲတမ်းတင်းတင်းစေ့ထားတတ်ပေမယ့် သူပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းအသက်ပါတာပဲ တကယ်ပြောတာ ... ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေဟိုကောင်တွေဆို ပိုး ပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းလှတာပဲတဲ့... လူက အလိုလို ရိုကျိုးမိလျက်သားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲ ကျွန်တော်တောင် ဒေါခွီးသေးတယ် အဲ့ကောင်တွေကို ... ကျွန်တော်တော့ မသိဘူး.. ဟုတ်တယ်လေ... ပြုံးပြတယ်ဆိုတာ မျက်မှန်းတန်းမိတဲ့လူလောက် အိမ်နီးနားချင်းလောက်သာ ပြုံးပြလို့ကောင်းတာ ... ကိုယ့်အိမ်သားအချင်းချင်း ဘယ်သူက အဲ့လိုကြီး နှုတ်ဆက်ပြုံးပြုံးလို့တုန်း... ကျွန်တော်ကလည်း အိမ်သားလိုပဲဆိုတာ ကိုယ့်ဆရာတို့လည်း အသိသားနဲ့.. အဲ့တော့ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ပိုးပြုံးရင် လှတယ်ဆိုတာကျွန်တော် မသိဘူးဗျ... နောက် သူ့အကြောင်း ကျွန်တော်သိတာ တစ်ခုရှိသေးတယ် ပိုးက နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးတတ်ဘူး... ဘာလို့လဲလို့ ကျွန်တော်မေးဖူးတယ်... ``အိုက်လို့´´တဲ့ ... ပိုးက လက်ချောင်းခြေချောင်းလေးတွေ သိပ်လှတယ်... ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လေးတွေ... သူ့လက်ချောင်းထိပ်ကလေးတွေဆိုဖောင်းပြီးရဲနေတာပဲ... ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အဲ့ဒီလက်ထိပ်တွေကို ညှစ်ပြီး အပ်နဲ့ဖောက်ချင်တာ အရမ်းပဲ... အင်း အဲ့လိုဆိုတော့လည်း ပိုးက လှတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော့... ပိုးကို တစ်ခါမှ လှဧ။် မလှဧ။် မဝေဖန်ခဲ့ဖူးဘူး အမှန်ပြောရရင် သတိလည်း မရဘူး.. ဘာလို့ဆို သတိရခဲ့သည့်တိုင် ရွေးစရာမှမရှိခဲ့ပဲ ... ပိုး လှသည်ဖြစ်စေ မလှသည်ဖြစ်စေ တစ်နေ့ကျွန်တော် သူ့ကိုလက်ထပ်ရမှာပဲ... ဒါ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ပြဌာန်းထားပြီးသားသမိုင်းပေးတာဝန်လိုကိုသိနေတာ... အခု ကျွန်တော်အဲ့ဒီသမိုင်းပေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းကို စလှမ်းလိုက်ပြီ...
``ပိုး လာဦးဟ ခဏ... ´´
``ဘာလဲ... ပြော... ဒီကနေ ကြားရတယ်...´´
``ကြားရတာသိတာပေါ့... ဒါပေမယ့် လာဦးခဏ...´´
``ဘာလဲဟာ နင်ကလည်း ရစ်နေပြန်ပြီ... ကြားရပါဆိုမှ ပြောမှာသာပြော...´´
``ပိုး ငါခေါ်နေတယ်.. လာဆိုလာ အခု...´´
တကယ်ဆို နင်လာပါလား လို့ ပိုးပြန်ပြောလုိ့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ပိုးတစ်ခါမှ ကျွန်တော့်ကို အဲ့လိုပြန်မပြောခဲ့ဘူးဆိုတာပဲ... အဲ့ဒါတစ်ခု ကျွန်တော်ကျေနပ်သွားတယ်.. နောက်ထပ်ကျေနပ်စရာတစ်ခုက ပိုးက ရေဆော့နေတာကို အဟန့်ခံလိုက်ရတော့ ကလေးလိုပဲ ဆူအောင့်ပြီး သူ့ဖိနပ်နှစ်ဖက် လက်ကကိုင်လို့ ကျွန်တော့ဆီလျှောက်လာတယ်... သြော် နောက်တစ်ခု သတိရလို့ပြောရဦးမယ်... ပိုးက ဒေါင်မြင့်ဖိနပ် မစီးဘူး.... သူက သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်အပါးလေးတွေပဲ အမြဲရွေးစီးတတ်တယ်... အခု သူကိုင်လာတဲ့ ဖိနပ်ကလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရွေးပေးထားတဲ့ ရွှေအိုရောင်ကြိုးလေးတွေ ရက်ထားတဲ့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်အပါးလေး... အဲ့ဒီဖိနပ်ကလေး ရွေးတုန်းကလည်း သူကတခြားတစ်ရံကြိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ဗီတိုအာဏာအရ သူအဲ့ဒီဖိနပ်ပဲ ၀ယ်ခဲ့ရတာ...
``ဘာလဲ ပြော ပြော...´´
ကျွန်တော့နားရောက်တော့ မတ်တပ်ရပ်လျက်ပဲ သူဆောင့်ဆောင့်အောင့်အောင့် မေးတယ်...
ကျွန်တော်ရယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းထားရတယ်... ပိုးက တစ်ခါတစ်လေ သိပ်ကလေးဆန်တာပဲ... လက်က ကိုင်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကိုလည်း ပြန်မစီးသေးဘူး... နောက် သူ့အိတ်ကို တစ်ချက်မျက်လုံးဝေ့ကြည့်တယ် ... ပြီးတော့ ကျွန်တော့ဘေး သစ်ပင်အမြစ်ဆုံကြီးပေါ်မှာပဲ... ဖိနပ်ပြန်စီးဖို့ သူထိုင်လိုက်တယ်... ဖိနပ်က ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ဆိုတော့ ကွင်းပြန်တပ်နေတာနဲ့ ဘာနဲ့မို့လို့ ထိုင်စီးမှအဆင်ပြေတယ်.. သူက အဲ့ဒါကြောင့် ရိုးရိုးကွင်းထိုးဖိနပ်အပါးပဲဝယ်ဖို့ပြောခဲ့တာကိုး... ကျွန်တော်ကတော့ မသိဘူးလေ... ကိုယ်စီးရတာမှမဟုတ်တာ အဲ့လောက်အလုပ်ရှုပ်မယ်မှန်းမထင်မိလို့ပေါ့.. နောက်ပြီးဖိနပ်ဆိုတာ အိမ်ကနေ အထွက်တစ်ခါ အ၀င်တစ်ခါ နှစ်ခါပဲ အလုပ်ရှုပ်မှာလို့ပြောပြီး ဇွတ်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ... ဒါပေမယ့်... ပိုးက အဲ့လို ဖိနပ် ချွတ်ရ စီးရခက်ခဲသည့်တိုင် ကျွန်တော့်ကြောင့်လို တစ်ခါမှ အပြစ်တင်စကားမဆိုဘူး... ပြီးခဲ့တာတွေကို မမှတ်မိသလိုပဲ...
တကယ်တမ်း ပိုးကိုရည်းစားစကားပြောရတော့မယ်ဆိုတာလည်းသိရော ကျွန်တော်ဗျာ တောက်လျှောက်ကြီး ငြိမ်ချက်သားကောင်းလာတဲ့ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး ထိန်းမနိုင် သိန်းမရ ဗြောင်းကိုဆန်နေရောပဲ... ပိုး ကျွန်တော့်ဘေးမှာထိုင်ပြီး ဖိနပ်စီးနေတာ ကျွန်တော့်အတွက် အများကြီးကံကောင်းသွားတယ် ကျွန်တော် ပိုးကိုကျောပေးပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်...သူ ဖိနပ်စီးရခက်တာကိုပဲ ကျွန်တော့်မှ ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေရတယ်...
``ပိုး... ငါ ဘယ်သူလည်းဆိုတာလည်း နင်မမေ့ပါနဲ့... နင့်ကိုယ်နင်လည်း မမေ့နဲ့... နင်ဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ ငါ့အပိုင်ဖြစ်လာရမယ့်လူဆိုတာ အမြဲတမ်းခေါင်းထဲထည့်ထား... ငါ ဒါပဲ ပြောမယ်... ´´
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်... ကျွန်တော့်ရင်တွေခုန်လိုက်တာများဗျာ... တစ်ကိုယ်လုံးချွေးတွေလည်းရွှဲလို့... လမ်းလျှောက်တာလည်း လိုချင်သလောက် အမြန်နှုန်းကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်... ပိုး ကျွန်တော့ကျောပြင်ကို လှမ်းကြည့်နေမှာမှန်းသိလေ ကျွန်တော့ အဲ့ဒီနေရာကနေ ဖြတ်ကနဲ ပျောက်သွားချင်စိတ်က ကြီးလေပဲ... တကယ်တမ်း ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေ တစ်လုံးမှထွက်မလာဘူး... စိတ်ကူးထားတာက က ပိုးကိုခေါ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင် ပိုးမျက်နှာလေး သေသေချာချာကြည့်ပြီး ``ပိုးရယ် နင့်ကို ငါအရမ်းချစ်ပါတယ်... ငါ့ဘ၀ထဲက နင်ထွက်သွားမှာကို ငါသေမလောက်ကြောက်တယ် .. ငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်း ထားပြီး နင်ဘယ်မှထွက်မသွားပါနဲ့နော်လို့´´ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ရည်းစားစကားလေးတော့ အဆင်ပြေပြေပြောဖြစ်ချင်တာ... အခုတော့ဗျာ.... ဟူးးးးးးးးး ပိုးရယ် မထင်မိဘူး.. နင့်ကြောင့် ငါ ရူးရလိမ့်မယ်လို့... တကယ်ချစ်တဲ့အခါ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာပြောရခက်တယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ...
ပိုးတော့ ဖိနပ်စီးရင်း တန်းလန်း ဘယ်လိုကျန်ခဲ့တယ်မသိဘူး... ကျွန်တော်တော့ သတိထားမိတော့ ပြည်လမ်းပေါ်က ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ နေပူကျဲတဲကြီးအောက် လမ်းလျှောက်နေတာပဲ... ကျွန်တော် ရေဆာတယ်ဆိုတာ သတိရလာတယ်... ဒါနဲ့ရေသန့်ဗူးဝယ်ဖို့ အနားမှာရှိတယ် မီနီမားကတ်တစ်ခုကိုကို ၀င်မိတော့ အ၀မှာပဲ ဆယ်တန်းတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ပိုးတို့ရဲ့ ကျူရှင်ဝိုင်းပိုင်ရှင် အင်္ဂလိပ်စာဆရာကြီး ဆရာရောဘတ်အောင်နိုင်နဲ့တွေ့တယ်...
``ဟာ... ဆရာ... နေကောင်းလား... ဆရာ...´´
``ဟေ အေး... မင်းညိုစင်ပါလားကွ ... အေးကွာ ဆရာတော့နေကောင်းပါရဲ့... ဒါနဲ့ မင်း ဘယ်နှစ်ရောက်ပြီတုန်း ဘာမေဂျာတုန်းကွ...´´
``Geology 3rd year ပါဆရာ…´´
``ဟေ ဟုတ်လား အေးပေါ့ကွာ အချိန်တွေတောင်ကြာလှပေါ့ မင်းညီမတောင် 1st year တက်နေပြီဆိုတော့…´´ ဆိုမှ ဆရာ့ဘေးနားကကောင်မလေးကို သတိထားမိတယ်…
``ယက်စ်… ´´ ကောင်မလေးက ခပ်သွက်သွက်ဝင်ဖြေပါတယ်…
``ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တုန်းတုန်းက ဒီကောင်မလေး ဂါဝန်လေးနဲ့ ပြေးဆော့တုန်းနော် ဆရာ…´´
``အေးပေါ့ကွာ မင်းတို့တောင် ကျောင်းပြီးတော့မှာပဲကို သူလည်းဒီအရွယ်ရှိပြီပေါ့ကွ… မင်းနှယ်… ဒါနဲ့ ပိုးပိုးရော…´´
ရုတ်တရက် ဆရာမေးမှ လောလောလတ်လတ် ပိုးပိုးကို ရည်းစားစကားပြောလာတဲ့ကျွန်တော် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး…
``ရှိတယ်ဆရာ သူလည်းကျောင်းမှာပဲ သူက သင်္ချာ…´´
``သြော် အေးအေး… မင်းတို့လည်း အားရင် အိမ်ဘက်လှည့်လာပါဦးကွာ… မင်းညီမလည်း အပ်တယ် ကျောင်းမှာ အမြင်မတော်တာရှိရင် ဆုံးမကွာ နော်… ´´
``ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကြုံတုန်း ကျွန်တော်တစ်ခုခု ပြုစုပါရစေ….´´
``ဟာ ဟေ့ကောင် နေ.. နေ.. ဆရာလည်း ၀ိုင်းတစ်ခုသွားရမယ် … မင်းညီမကို လမ်းကြုံလိုက်ပို့တာ… သွားမယ်ဟေ့ အချိန်ကပ်နေပြီ…´´
``ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ… ´´
ပြောပြောဆိုဆို ဆရာ သူ့ကားပေါ်တက်ရင်း မောင်းသွားတယ်…
``ရေသန့်ဗူးလား ၀ယ်မနေနဲ့ လာ…. ကြည်ပြာလည်း အတန်းစောသေးတယ် … အအေးတိုက်မယ်လေ…´´
``အာာာ နေပါစေ.. မဟုတ်တာ.. ရေပဲဝယ်လိုက်ပါမယ်…´´
``ဘာလဲ စေတနာနဲ့ ဒယ်ဒီ့တပည့်မို့လို့ ကိုယ့်အစ်ကိုလို သဘောထားပြီး တိုက်တာကို အသိအမှတ်မပြုလို့လား…´´
ကောင်မလေး စကားက ကျွန်တော့်ကို လှုပ်မရအောင် ချည်ပြီးတုပ်ပြီးသားဆိုတော့
``အားနာရင် နောက်တစ်ခါကျ ကိုညိုက ပြန်တိုက်ပေါ့ … ဟုတ်ဘူးလား … ကဲ လာ သွားစို့…´´
ပြောပြောဆိုဆို သူမရှေ့ကနေ ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း သူမနောက်က လိုက်ခဲ့တော့တယ်… သူမသွားနေတာက ကျွန်တော့်လာရာလမ်းကြီးအတိုင်း ပိုးများ ဟိုနေရာမှာ ရှိနေဦးမလားလို့ ကျွန်တော်စိတ်ပူသွားတယ်… သစ်ပင်အောက်မှာ ပိုးကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှ ကျွန်တော် အသက်ရှူချောင်သွားတယ်…
ဘာသောက်မလဲလို့မေးတော့ ကျွန်တော်က ကြိုက်တာမှာပါ လို့ဖြေလိုက်တယ်…
ကြည်ပြာက ကြံရည် ၂ ခွက်မှာလိုက်တယ်… ပိုးသာဆို ကျွန်တော့်အတွက် သံဗူးကို သံပုရာရည်ချဉ်ချဉ်လေး ညှစ်ပေးဖို့မှာပေးမှာဗျ… ဟောဗျာ.. ကျွန်တော့်အတွေးတွေထဲ မိပိုး အချိန်တိုင်းစိုးမိုးနေပါပေါ့လား…
``ကြည်ပြာကျောင်းတက်တာ နှစ်ဝက်ကျော်နေပြီ ကိုညို့ကို တစ်ခါမှမတွေ့မိဘူး…´´
``ဟုတ်လား… ကိုညိုက ဘူမိဗေဒဆောင်မှာလေ… ကြည်ပြာတို့ အင်္ဂလိပ်စာဆောင်နဲ့ ဝေးတာပေါ့…´´
``အင်းလေ ကြည်ပြာလည်း ဘူမိဗေဒဘက် လာရှာတာပဲကို… ခဏခဏပဲ… ´´
ဗုဒ္ဓေါ ဘူမိဗေဒဘက်ကိုလာရှာတာတဲ့… ကျွန်တော်တောင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ဘယ့်နှယ့်ဟာလေးပါလိမ့်… သူလာလည်း မင်းညိုစင်ဆိုတာ ဘူမိဗေဒဆောင်မှာမရှိဘူး တွေ့ချင် သင်္ချာဆောင်လိုက်သွားဆိုတာ ဒီက စီနီယာကျောင်းသားတိုင်းသိတယ်… ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဒီကလေးမ မမေးခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်…
``ကိုညိုတို့ ဆယ်တန်းကျူရှင်လာတက်တုန်းက ကိုညိုကြည်ပြာ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ ကီးချိန်းလေးလေ ကြည်ပြာအခုထိ သိမ်းထားတယ်သိလား… ဒီမှာကြည့်..´´
ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ လွယ်အိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ ၀က်ဝံရုပ်ကီးချိန်းလေးကို ကျွန်တော့်ကိုပြတယ်…
``ခုထိ ရှိသေးတယ် ဟုတ်လား´´
``ရှိတာပေါ့… တစ်ခါတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပါတီသွားတုန်းက နောက်ပြီးဖွက်ထားလို့တောင် ရန်ဖြစ်ရသေးတယ်…´´
ကျွန်တော် ပြုံးတယ်ဆိုရုံ ပြုံးပြလိုက်တယ်… အဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့ယှဉ်ရင် ကျွန်တော့်ပိုးက တကယ့်ကို အဖိုးထိုက်ရတနာလေးပါလားဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူသလိုလိုတောင် ဖြစ်မိသေးတယ်…
``နောက်နေ့ ကြည်ပြာတုိ့ အတန်းဘက်လာခဲ့ပါလား… သူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားချင်လို့ အစ်ကိုချောချောတစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်း…´´
``လမ်းကြုံမှလား… ကြည်ပြာက တကူးတက ဖိတ်တယ်ဆိုရင်ရော…´´
``ဟုတ်ပါပြီ လာခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ… လာခဲ့ပါမယ်…´´
``တကယ်… ကတိနော်… Promise…´´
``အင်း promise... အခုတော့ သွားစရာလေးရှိသေးလို့ ခွင့်ပြုဦးနော်…´´
``အိုခေ အိုခေ ဆီးယူ ..´´
ကျွန်တော်အတန်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်… ဘာပဲပြောပြော ဒီနေ့ လူရိုသေရှင်ရိုသေဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ပိုးကို ရည်းစားစကားပြောခဲ့ပြီ… တရားဝင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ… အဖြေလည်းပြန်တောင်းစရာမလိုဘူး သူဘာမှ မပြောနိုင်ခင်အငိုက်ဖမ်းပြီး ကိုယ်ပြောချင်ရာ စွတ်ပြောခဲ့တာ ကဲ မပိုင်လား… ခုနက ရင်တွေခုန်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးထူပူနေသလောက် အခုသွေးအေးသွားတော့လည်း ဒီနေ့မှ လောကကြီးက ပိုလှနေသလို… ရှူရတဲ့လေချင်းတူတူတတောင် ဒီနေ့မှ ပိုလတ်ဆတ်နေသလိုပဲ… အို ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ… ဆုံနေကျဆိုတဲ့ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ အကြော်တဲလေးတောင် ဒီနေ့မှ ဖိုက်စတားဟိုတယ် လိုပဲ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ အတော်ကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပြီး အတော်ကိုခမ်းနားနေတာ… လမ်းမှာနည်းနည်းမျက်မှန်းတမ်းမိတဲ့လူမှန်သမျှကို အတင်းလိုက်သွားဖြဲပြချင်နေမိတာ… တစ်ယောက်ယောက် ပိုးအကြောင်းလာမေးစေချင်တာ… ဒီနေ့မှဗျာ ဘယ်သူကမှလည်း တစ်ယောက်တည်းလား လို့ နှုတ်မဆက်ကြဘူး… အဲ့လိုမေးလို့ကတော့လား ခုလေးတင် အခန်းထဲလိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတာလို့ ကျွန်တော့်က ပါးစပ်အရသာခံပြီးပြောချင်တာဗျ…ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အသာထားပေါ့ဗျာ…
ညနေပိုးနဲ့အတူတူ အိမ်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော်ကသာ မလုံမလဲရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေပေမယ့် သူမကတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ … ဘာမှထူးမလာဘူး… သြော် မိန်းကလေးတွေများ ဒီလိုနေရာမျိုးကျ သိပ်လေးစားဖို့ကောင်းတာပဲ… သူတို့ကိုယ်သူတို့ လိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်နော်… အားကျတယ် တကယ်…
အဲ့ဒီရက်နောက်ပိုင်း ကြည်ပြာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း ကျွန်တော့်ဆီနေ့တိုင်းလိုလိုရောက်တယ်ဗျာ… ကျွန်တော်သူ့ကို ပိုးဆီသွားမှာမို့လို့ လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ဟိုလူနဲ့တွေ့စရာရှိလို့ အဖော်လိုက်ပါဦး… ဒီအဆောင်ကိုမသွားတတ်လို့… လိုက်ပို့ပါဦး.. တစ်ခါတစ်ခါများ သူ့အဖေခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ အပြင်များတောင်လိုက်ပေးရသေးတယ်… ဆရာ ဦးအောင်နိုင်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် ငယ်ကြောက်ဆိုတာအပြင် ဆရာက စာသင်တာလည်း စေတနာ တော်တော်ပါပါတယ်… မိဘတွေကအစ ဆရာ့ကိုဆိုရင် ၀ကွက်အပ်ပြီးသား… တစ်ခုပဲ ဆရာက နည်းနည်းတော့ ခေတ်ဆန်တယ်ဗျ… အဲ့ဒီတော့ သူ့သမီးလုပ်တဲ့လူ ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်နေတာလဲ ဆန်းတော့မဆန်းဘူးပေါ့လေ… သူ့အဖေကလည်း အခုတလော ကျွန်တော့်ကို မကြာခဏ သူ့အိမ်ခေါ်ပြီး လိုအပ်တာမျိုးလေး ခေါ်ခေါ်ခိုင်းတတ်တယ်ဗျ… ကျွန်တော်လည်း ခေတ်လူငယ်ပေမယ့်… အဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေကို အထင်ကြီးလို့မရဘူး… ဖြစ်နိုင်ရင် ကင်းအောင်နေချင်ပေမယ့် ဆရာ့ကျေးဇူး ဆရာ့မျက်နှာကြောင့်မို့လို့ သည်းခံပြီးနေခဲ့ရတယ်…
ဒီကြားထဲ ကျွန်တော်ပိုးနဲ့ တစ်လလောက်ခွဲနေရမယ့် အကြောင်းကရှိလာပြန်တယ်… ကျွန်တော်တို့ ဘူမိဗေဒကျောင်းသားတွေ လက်တွေ့ဆင်းရမယ့်အချိန်ရောက်လာတာပါပဲ… ကျွန်တော် ပိုးကို ထားခဲ့ရမှာ စိတ်မချဘူး … ခုတလော ဟိုကောင်သတင်းမကြားရဘူးဆိုတာကလည်း သွေးရိုးသားရိုးဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ… ကျွန်တော့်ကို တစ်ပတ်ရိုက်ပြီး အကွက်သစ်ထွင်တာလဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်… ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့စုံမယ့် စုရပ်ကို ပိုးကိုကျွန်တော် လိုက်မပို့ခိုင်းတော့ဘူး… အပြန်သူတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာစိုးလို့… ကျွန်တော် အိမ်ကအထွက်မှာပဲ သူ့ကို ၀င်နှုတ်ဆက်ရင်း
``ပိုး ငါ မရှိတုန်း ဘယ်မှလျှောက်မသွားနဲ့နော်…´´
ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုးကျောင်းသွားကျောင်းပြန် တစ်ယောက်ယောက်ကို အကြိုအပို့လုပ်ပေးစေချင်တာ… ဒါပေမယ့် ကလေးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ် တတိယနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်သူက ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့လုပ်ပေးချင်မှာလဲ… နောက်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်လည်း မအားကြဘူးလေ…
``ကျောင်းသွားရင် ထီးယူသွားဖို့မမေ့နဲ့ဦး အိတ်ထဲအမြဲထည့်ထား…´´
အဲ့ကောင်မလေးက နေပူပူ မိုးရွာရွာ ထီးဆောင်းရမှာ သေအောင်ပျင်းသော အပျင်းမလေးဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ကပဲ အမြဲတမ်း ထီးဆောင်ပြီး လိုက်မိုးပေးနေကျ… ပြီးရင် သူပဲ နှာစေးရတာနဲ့ ချောင်းဆိုးရတာနဲ့…
``ငါ စိတ်ချမယ်နော် ပြန်လာရင် ဘာသံ ညာသံမကြားချင်ဘူးနော်…´´
``အေးပါဟာ… သွားမှာသာ သွားပါ…´´
ကျွန်တော်ပိုးကို နောက်ဆံငင်ငင်နဲ့ပဲ ထားပြီးထွက်ခဲ့တယ်… အင်းလေ သူလည်း ကလေးမှ မဟုတ်တော့တာ… ကျွန်တော်မရှိလည်း သူ့နေ့ရက်တွေကို အဆင်ပြေပြေ ဖြတ်ကျော်နိုင်ကောင်းပါရဲ့…
ကျွန်တော် စုရပ်ကိုရောက်တော့ ကားထွက်ဖို့နည်းနည်းလိုသေးတာနဲ့ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုထိုင်ပြီး စကားပြောနေတုန်း… ကားတစ်စီးထိုးရပ်လာတယ်… နောက် ကားပေါ်ကနေ ကြည်ပြာနဲ့ ဆရာအောင်နိုင်ဆင်းလာတာကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော် သွားပြီး နှုတ်ဆက်စကား ဆိုရတာပေါ့
`` ဆရာတို့ပါလား… ဘယ်လာတာလဲ ဆရာ…´´ သိပေမယ့်လည်း ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး မေးရတာပေါ့
``မင်းနှမလေကွာ ဒီနေ့ မင်းတို့ ထရစ်ပ်ထွက်မှာသိလို့ လိုက်ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ အတင်းပူဆာနေတနဲ့ ငါလည်းလိုက်ပို့ရတာကွ…´´
`` ဟုတ်တယ် ကိုညိုက ထရစ်ပ်ထွက်မှာကို ကြည်ပြာ့ကိုတောင် မပြောဘူး နေနိုင်လိုက်တာ ဒီက လိုက်စုံစမ်းမှသိရတယ်…´´
``မဟုတ်ပါဘူး ကြည်ပြာရယ် ဒါက ဘာမှလည်း ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး ကျောင်းသားတိုင်း ဒီလိုပဲ သွားနေကျပဲဟာ… အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ…´´
``ကဲပါ ထားလိုက်ပါတော့ ဒီတစ်ခါတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်မို့လို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ် နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ မရဘူးနော်… ရော့ ဒါတွေ လမ်းမှာစားရအောင် ယူသွား..´´
ဆိုပြီး အထုတ်ကြီး ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းပေးတယ်…
``အာာ မဟုတ်တာ နေပါစေ… ကိုညို့မှာ ပါပါတယ်… အလကား ဒုက္ခရှာလို့ ကြည်ပြာရယ်… မေမေကလည်း ထည့်ပေးလိုက်တယ် ပိုးတို့အိမ်ကလည်း စားစရာတွေထည့်ပေးသေးတယ်… အများကြီးရယ်…´´
``ဘာလဲ ဒီက စေတနာနဲ့ တကူးတက၀ယ်ပေးတာတွေ အလကား အပိုတွေလို့ပြောချင်တာလား အလေးခံပြီးသယ်စေချင်လုိ့ ၀ယ်လာတာ မဟုတ်ဘူးနော်..´´
ဘေးက လူတွေကလည်း စပ်စုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်နေကြပြီ
``ဟုတ်သားပဲ မင်းညိုကလည်းကွာ ကိုယ့်ညီမအကြောင်းလည်း ကိုယ်သိသားနဲ့.. တော်ကြာ သူပေးတာမယူလို့ စိတ်ကောက်မှဖြင့် မင့်ခရီးပျက်ပါမယ်လေ…´´
ကြည့် ဘယ်လောက် အဆင်းဘီးတပ်တော်သလဲဆိုတာ ဆရာပြောတဲ့စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က သူစိတ်ကောက်ရင်ပဲ ကျွန်တော့်ခရီးက ပျက်ရဦးမယ် ဝေလာမှ ဝေးရော… ရယ်တောင်ရယ်ချင်သေး…
``ဒါဆိုလည်း ကျေးဇူးပဲ ကြည်ပြာ…´´
``ကျေးဇူးတင်ရင် ပြန်လာရင် ကြည်ပြာ့အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့…´´
``အင်း ၀ယ်ခဲ့မယ် ၀ယ်ခဲ့မယ် စိတ်ချ..´´
``သြော် ကျန်သေးတယ် … ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကြည်ပြာ့ကို အရင်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ့မယ်လို့ ကတိပေး…´´
ဒါတော့ တဆိတ်လွန်ပြီ… ဒါပေမယ့်..
``ကောင်းပါပြီဗျာ ကောင်းပါပြီ… ကဲ အခုတော့ ကားပေါ်ကို အထုတ်လေးတွေနေရာချချင်လို့ ခွင့်ပြုဦးနော်…´´ ကျွန်တော်လည်း လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းဖန်ရတော့တာပေါ့ဗျာ…
``အေး အေး ကောင်းပြီ မင်းညို… အန္တရာယ်ကင်းပါစေကွာ… ဂွတ်လပ်…´´
သူတို့ သားအဖကားမထွက်မချင်း ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီးမယ့်ကားပေါ်ကနေ မဆင်းဘူး…
တော်သေးတယ် သိပ်မကြာဘူး ပြန်သွားလို့… ပိုးရယ် ငါ့လို အဲ့လို လိုက်ပို့တဲ့လူက နင်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ… အပြန်သူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေမှာစိုးလို့သာ….
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ခရီးစဉ်ဟာ ပိုးတလှည့် မြေစိုင်ခဲတွေတလှည့်နဲ့ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့တယ်… ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှာ အထုပ်ချပြီးတာနဲ့ပိုးတို့ အိမ်ဖက်ထွက်ခဲ့တယ်…
ပိုးကို အရင်ဆုံး ၀မ်းသာစေချင်လို့လေ … အိမ်မှာ ပိုးအစ်မ မမိုးနဲ့တွေ့တယ် ပိုး လမ်းထိပ်မှာ စာအုပ်သွားငှားတယ်တဲ့… ပထမတော့ ကျွန်တော်လိုက်သွားဦးမလို့ပါပဲ … နောက်တော့ ပိုးကိုအံ့သြသွားအောင် စမယ်ဆိုပြီးတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်… ပိုး စာအုပ်သွားငှားတာ နည်းနည်းတော့ကြာတယ်… သူက အဲ့လိုပဲ ဘယ်အရာမဆိုတွေဝေနေကျ အခုလည်း ဟိုစာအုပ်ငှားရမလို ဒီဟာလည်း ကြိုက်သလိုဖြစ်နေတာ နေမှာပေါ့… အရင်တုန်းက သူစာအုပ်ငှားရင် ကျွန်တော်လိုက်တတ်ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ မလိုက်တော့ဘူး… ဟုတ်တယ်လေ ပျင်းစရာကြီး မယ်မင်းကြီးမ စာအုပ်တစ်အုပ်ငှားဖို့အရေးကို စာအုပ်တစ်ဝက်လောက်ရောက်အောင် ဖတ်သေးတာ… ပြီးမှ မကြိုက်ဘူးဆိုလုပ်ပြီးနောက်တစ်အုပ်ပြန်ကိုင်… ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ … အဲ့တော့ ဘယ်သူက စိတ်ရှည်နိုင်မှာလဲ… စာအုပ်ဆိုင်ကဆို သူရှိရင် ဘယ်သူမှ အရေးတယူလုပ်ပြီး အနားမှာ စာအုပ်စာရင်းမှတ်ဖို့လာစောင့်မနေဘူး… တခြားအလုပ်ပျက်လို့… သူ့ဟာသူရွေးတယ် ကြိုက်ရင် သူ့ဟာသူ စာအုပ်ထဲရေးမှတ်ပြီး ယူသွားတယ်… ဒါပဲ…
ဟော လာပါပြီ မယ်မင်းကြီးမ… ကျွန်တော် ဧည့်ခန်းဖိနပ်ချွတ်နားက အခန်းကန့်ထားတဲ့ နံရံမှာ ၀င်ကွယ်နေလိုက်တယ်… ပိုး ၀င်လာတော့မှ…
ကြည့်… အဲ့လို အောင့်သီး အောင်သက်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ပြန်ရော… တကယ်ဆို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေး ဟယ် မင်းညို နင်ပြန်ရောက်နေပြီ ဟုတ်လား ဘယ်တုန်းကရောက်လဲ ဘာလဲ ညာလဲ ပြောပါတော့လား…
``ဟင်း….အားနားပါးနားလေးတောင် မလန့်ပြဘူး… ဘယ့်နှယ့်လဲ အစစအရာရာ…´´
``အင်း… နင့်အတွက် လုံချည်တွေပါလာတယ်… ခြောက်ထည်စည်းဟ ငါလည်းမရွေးတတ်ဘူး… နင်ကြိုက်တာ ရွေးယူပေတော့ မေကြည်နဲ့ မမိုးအတွက်လည်း ပါတယ်.. ကြည့်ကျက်သာလုပ်လိုက်တော့… ´´
`` ဟေ့အေး အခုပဲရောက်တာဟ အိမ်မှာအထုတ်ချပြီးတာနဲ့ ဒီဘက်ထွက်လာတာ… နင်မေးမှ ဗိုက်ဆာလာသလိုပဲ…´´
``အေး အေး နေဦး ငါခူးပေးမယ် … ဒီနေ့ ငါးဖယ်ချက်ဟ…´´
``ဟေ… နိပ်ဟ… စားရကံကြုံတော့ ပိုးပိုးတို့အိမ်ငါးဖယ်ချက်ကွ…´´
ပိုး ထမင်းစားခန်းထဲသွားတော့ နောက်ကနေလိုက်သွားပြီး ထမင်းစားပွဲမှာထိုင်ပြီး သူကျွန်တော်စားဖို့ပြင်ပေးနေတာကို လိုက်ကြည့်နေမိတယ်… ပိုးက အမေနဲ့အစ်မ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ သေသေ၀ပ်ဝပ်နဲ့ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးဗျ… သမီးအငယ်လေးဆိုပြီး အိမ်ကအလိုလိုက်ထားမယ် မထင်လေနဲ့… မိန်းကလေးတို့ တတ်အပ်တဲ့ အိမ်မှုကိစ္စမှန်သမျှ လက်ကြောတင်းအောင် ခိုင်းတာ… ပိုး လုပ်ပုံကိုင်ပုံကိုကြည့်ရတာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ တကယ့်အိမ်ရှင်မကြီးအတိုင်းပဲ…
``ဟင်းရည် နွှေးဦးမလား… အရမ်းကြီးတော့မအေးသေးဘူး ငွေ့ငွေ့လေးကျန်သေးတယ်…´´
``ဟေ့အေး နေပါစေတော့ ဒီတိုင်းပဲသောက်မယ် ဆာလှပြီဟ… မစောင့်နိုင်တော့ဘူး…´´
``ဟွန်း ဒါများ ရောက်ကတည်းက ၀င်စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကလေးကလား ငါ့ကိုခြောက်ဖို့ အဆာခံစောင့်နေရတယ်လို့…´´
ပိုးကမျက်စောင်းထိုးရင်း ကျွန်တော့်ကို အပြစ်တင် စကားဆိုပါတယ်
``သြော် အဲ့တုန်းကမှ မဆာတာ နင့်မျက်နှာကြီးမြင်လိုက်ရမှဘယ့်နှယ့်ဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး ဗိုက်ကဆာလာတာ… ဟား ဟား ဟား…´´
နောက်နေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပိုးကိုသူ့အတန်းထဲပို့ခဲ့ပြီး မနက်ပိုင်းအတန်းအားတဲ့ကျွန်တော်က အောင်ကိုရှိမယ့် ကင်န်တင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်…. အောင်ကိုက ဆယ်တန်းတုန်းကတည်းက ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်း ကျူရှင်တူတူတက်ခဲ့တာပေါ့… အခုတော့သူက မြန်မာစာ ကျောင်းသား… ပိုးနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကို သူအကုန်သိတယ်… နှစ်ဘက်လုံးက မိဘတွေနဲ့လည်း သိတဲ့လူပေါ့… ကျွန်တော်ရောက်တော့ အောင်ကိုက လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရှေ့ချပြီး အပါတ်စဉ်ထုတ် အားကစားဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုဖတ်နေတယ် … အောင်ကို့လက်ဖက်ရည်က တစ်စက်မှ မထိရသေးပဲ အပေါ်ယံအမြှေးပါးလေးတွေတောင်တက်နေတာကြည့်ရင် ဒီကောင်ရောက်နေတာ နာရီဝက်ကျော်နေပြီမှန်း ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်… သူ့နောက်ကျောဘက်က ကျွန်တော်ဝင်လာတာမို့ သူ့ပခုံးကို တစ်ချက်လှမ်းပုတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်…
``ကျဆိမ့် တစ်ခွက် ညီလေး…´´
``ကျဆိမ့် ၀မ်းးး´´ စားပွဲထိုး ကောင်လေးရဲ့ အောင်မြင်ခံ့ညားတဲ့ အသံအဆုံး
``ခရီးရောက် မဆိုက်မင်းကို အမောဆို့အောင်လုပ်မိတယ်ဆိုရင် ဆောရီးကွာ… ဒါပေမယ့် ငါဟာ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်းလည်းမနည်းတော့ဘူးဆိုတော့ ငါ့မှာပြောရမယ့် ၀တ္တရားရှိတယ်လို့ ငါယူဆလို့ ငါပြောမယ်…´´
``မင်းစကားကလည်းကွာ ရင်တုန်ပန်းတုန်ရှိလိုက်တာ ပြောမှာသာပြောစမ်းပါ…´´
``အေး မင်း ဒေါသတော့ အရင်မထွက်နဲ့ကွာ…စိတ်အေးအေးထား…´´
``အေး မင်းတို့ဖီးလ်ဆင်းနေတဲ့အချိန်တွေ ပိုးပိုးနဲ့ ၀ါဝါ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲနဲ့ တတွဲတွဲပဲ ဟေ့ကောင်…´´
``ဘာ….´´ ကျွန်တော် အော်လိုက်မိတယ်..
``ဟုတ်တယ်… တစ်ချိန်လုံးပဲ… ပိုးပိုးဆို အတန်းဖျက်ပြီးတော့ကို သူ့ကားနဲ့ ပါပါသွားတတ်တယ်…´´
မဖြစ်နိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူး ပိုးပိုးက သူ့ကားနဲ့လိုက်သွားတယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး… ကျွန်တော်ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ယမ်းနေမိတယ်…
``မင်း စိတ်တိုမယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်ကွာ…. ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို မင်းအလောတကြီးမဆုံးဖြတ်စေချင်ဘူး… သူ့အမှားက ကိုယ့်အမှားဖြစ်မယ်သူငယ်ချင်း… သွေးအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါကွာ… နော်…´´
``ဘာ… ငါ့အမှား ဟုတ်လား… ငါက ဘာကိစ္စမှားရမှာလဲ… သစ္စာအဖောက်ခံရတာ ငါပါကွ… ရမလားကွ သူခိုးကလူကိုပြန်ဟစ်လို့… အောင်ကို ငါ အဲ့ဒီကောင် အကြောင်းသိချင်တယ်ကွာ….´´
``သိရမယ် သိရမယ်… ငါစုံစမ်းထားပြီးသား… နာမည်က လင်းထွဋ် စက်မှု နောက်ဆုံးနှစ်က မိဘကချမ်းသာတယ်
``ရတနာပုံ´´ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်… အစ်ကိုလုပ်တဲ့လူက နိုင်ငံခြားမှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး အခုအဲ့ဒီမှာပဲ အခြေချနေတယ်… ပြောရရင်တော့ တော်တော်လေးကို ပြည့်စုံနေတယ်… ဒါမင်းအတွက် မကောင်းဘူး မင်းညို…´´
``ထွီ နားစမ်းပါကွာ… ပိုင်ရှင်မသိအောင် ခိုးစားတဲ့ကောင်များ နာမည်ကြားရတာတောင် နားသနတယ် ဟေ့ယောင်…´´
``မင်း ဘာဆက်လုပ်မယ် စိတ်ကူးလဲ … ´´
``ဟ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကွ… ဒီကောင့်ကိုရှာပြီး ၀မ်နင်ပေးရမှာပေါ့ ဒါမှ ရှေ့ဆက်တိုးရဲတိုးလာကြည့်… ငါ့အကြောင်းသိရစေမယ်…မနက်ဖြန် သူ့ကျောင်းလိုက်သွားမယ်… မင်းလိုက်ခဲ့ အောင်ကို…´´
``အေး ကောင်းတယ်… သွားမယ်…´´
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနက်ဖြန်ထိ မစောင့်ရပဲ… ညနေ ဒီကောင့်ကားကိုပိုးတို့အဆောင်နားမှာ ရပ်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်… ကျွန်တော့်ဒေါသတွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဆူပွက်ကုန်တယ်… အပြေးတပိုင်းနဲ့ ပိုးကိုအတန်းထဲသွားကြည့်တော့လည်း မတွေ့ဘူး… ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားပြီး ပိုးတို့ကို ကျောင်းဝန်းအနှံ့ရှာပုံတော် ဖွင့်ပါတော့တယ်… သင်္ချာဆောင် တစ်ဆောင်လုံးရှာတယ် မတွေ့ဘူး… ကင်န်တင်းထိသွားရှာတာလဲ မတွေ့ဘူး… ကျွန်တော်စိတ်ပူစ ပြုလာတယ်… နောက်တော့မှ ပထ၀ီဆောင်ရှေ့ တရုတ်စကားပင်အောက်ကထိုင်ခုံမှာ နှစ်ယောက်သား အတူထိုင်နေတာကို အနောက်ဘက်ကနေလှမ်းတွေ့တယ်… ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဒေါသကြောင့် တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်… သူတို့ရှိရာဆီကျွန်တော်တမ်းတမ်းကြီးလျှောက်သွားခဲ့ပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးက သတိထားမိပုံမပေါ်ဘူး …
``ပိုး တောင်းပန်ပါတယ် ကိုထွဋ် ပိုးကို လာမတွေ့ပါနဲ့တော့ မင်းညိုလည်း ပြန်ရောက်နေပြီလို့ ပြောထားသားနဲ့… ´´
အောင်မာ မိပိုး ဒင်းကို ကိုထွဋ်တဲ့ ခေါ်ပုံကိုက နားရင်းပိတ်တီးချင်စရာ…
``ပိုးကလည်း စိုးရိမ်တတ်ရန်ကော… ကိုထွဋ်တစ်ယောက်လုံးရှိနေတာကို ဘာကြောက်စရာရှိလဲ… ဘာမှမပူနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ့်ဆီသာပြေးခဲ့ ဟုတ်ပြီလား ပိုးအခက်အခဲ မှန်သမျှ ကိုယ်ဖြေရှင်းပေးမယ်… ပိုးမျက်နှာလေးတော့ မြင်နေခွင့်လေးပေးပါ ပိုးရယ်… ပိုးကိုမမြင်ရရင် ကိုယ်ရူးလိမ့်မယ် ထင်တယ်…´´
ခွေးမသား ရာရာစစ…. ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး
ကျွန်တော့် ဒေါသတကြီးခေါ်သံကြောင့် နှစ်ယောက်လုံးလန့်သွားပြီး ပိုးက ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ရုတ်တရက်ခုန်ဆင်းလာတယ်… ကိုထွဋ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး မင်ကောင်ကောင်းနဲ့ ဆက်ထိုင်နေလေရဲ့..
``မိပိုး နင်ဒါဘာလုပ်နေတာလဲ ဟင်…´´
``ဟို… ဟို… ´´ သူ လက်ညှိုးကို တောင်ထိုး မြောက်ထိုးနဲ့ ဖြေစရာစကား ရှာမရဖြစ်နေတုန်း
``ဒီမှာညီ လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားသဘာဝ ကိုယ်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ် လူမြင်ကွင်းမှာ စကားပြောနေတာပါ… အဲ့ဒါ တစ်ခုခုများ မှားနေသလား…´´
``မှားတယ် မှားတယ် သိပ်ကိုမှားတာပေါ့…. ဟောဒီ့တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာလေ မိန်းကလေးတွေထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီရှိတယ် ကြိုက်တဲ့လူ ခင်ဗျားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ပိုးမပါဘူး…´´
ဒီ ငနဲတော့ လက်သီးစာမိချင်နေပြီ… စိတ်ကိုမနည်းဆွဲဆန့်ထားရတယ်…
``ခင်ဗျားမသိချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့… ပိုး နဲ့ကျွန်တော် တစ်နေ့ လက်ထပ်ရမယ့်လူတွေဆိုတာ ဟောဒီ တစ်လောကလုံးသိတယ်… အဲ့ဒါကြောင့် ပိုးအခု တတိယနှစ်ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော်ကလွဲရင်… ဘယ်ကောင်မှ အနားကပ်လို့မရခဲ့တာ အခုချိန်ထိပဲ…´´
``သြော် ဒါဆို… ညီနဲ့ ပိုး နဲ့က ချစ်သူတွေပေါ့…´´ ဒီကောင် ဘာလဲကွ နာချင်နေပြီလား
``အစစ်ပေါ့ မယုံရင် ကြိုက်တဲ့လူမေးကြည့်…´´
``ပိုးက ညီ့ကို ချစ်တယ်လို့ အဖြေပေးခဲ့တာပေါ့နော်… ကိုယ်မေးတာ ဟုတ်လား…´´
``ဒီမှာ ခင်ဗျားကိုယ့်ကိစ္စပဲ ကိုယ်အာရုံစိုက်ပါ သူများကိစ္စ၀င်မစပ်စုပါနဲ့ အဓိက က ပိုးနဲ့ လုံးဝမပတ်သတ်ပါနဲ့…´´
``ကိုယ်က ပိုးကိစ္စ ကိုယ့်ကိစ္စလို့ပဲ သဘောထားတယ် ဆိုရင်ရော…´´
``ဆောရီးပဲ ကိုယ့်လူ... ကျုပ်လက်သီးက နေရာမရွေးဘူး….´´
``ဟား တတိယနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးကလည်းကလေးကလားဆန်လိုက်တာ… ဆယ်တန်းတုန်းကလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့် ထိုးဟယ် ကြိတ်ဟယ်ဖြစ်တာ ဒီအရွယ်မှာ ရှက်တတ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ ကာယကံရှင် မိန်းကလေးသိက္ခာလည်း အများကြီးနစ်နာပါတယ်… ဥာဏ်သုံးပြီးရှင်းကြပါစို့…´´
စကားပြောပုံကိုက ဆရာကြီးလိုလို ဘာလိုလို … သောက်ချိုးကိုမပြေဘူး…
``ဘာမှ ရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး ခင်ဗျားလာမရှုပ်ဖို့က လိုရင်းပဲ ရှင်းတယ်နော်…´´
``ဒီမယ်ညီ.. ပိုးဟာ အသက်ပြည့်ပြီးသား စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ…သူ့မှာလည်း သူ့လွတ်လပ်ခွင့်….´´
``ဟာဗျာ… မသိဘူး… အဲ့ဒါတွေ ကျွန်တော်မသိဘူး… ဒီမှာ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် နောက်ဆုံးသတိပေးမယ်… ပိုး နားကိုချဉ်းကပ်ဖို့ လုံးဝ မကြိုးစားပါနဲ့… ပြောထားလျက်သားနဲ့မှ ခင်ဗျားစည်းကျော်လာရင် ကျွန်တော့်အဆိုးမဆိုနဲ့… လာ… ပိုး သွားမယ်…´´ ပိုး လက်ကို ကျွန်တော် ဆောင့်ဆွဲပြီးထွက်လာခဲ့တယ်…
အိမ်ပြန်တစ်လမ်းလုံး ကျွန်တော်ပိုးကိုစကားမပြောဘူး… ပြောချင်တာတွေက အများကြီးပဲ ရင်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတယ်…အသက်တောင်ရှူလို့မ၀သလိုပဲဗျာ…. တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ စကားလုံးတွေက တစ်လုံးမှ ထွက်မလာဘူး… ပိုးကတော့ အမှားလုပ်မိထားလို့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေး လိုက်လာတယ်…
ပိုးကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးပြီး ကျွန်တော်တန်းပြန်လာခဲ့တယ်… ဘာမှလည်း လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိဘူး… ပိုးကျွန်တော့်အပေါ်သစ္စာဖောက်တယ်လို့ တွေးမိရင် ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ… ယောက်ျားတန်မဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်… တကယ်ဆို ပိုးအပေါ် ကျွန်တော်က အမြဲအနိုင်ယူခဲ့ပေမယ့်… အခုပိုးကို ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ မြင်လိုက်ရတော့ ပိုးဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို အနိုင်ယူထားတယ်ဆိုတာ အလန့်တကြားသိလိုက်ရတယ်… ပိုးကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရရင်ဆိုတာကို တွေးမိရင် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို မီးစနဲ့ထိုးသလိုခံစားရတယ်… ပိုး ရယ် … ဒါတွေနင်မသိဘူးနော်… အိပ်ယာပေါ်အလူးလူးအလှိမ့်လှိမ့်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း အတွေးတွေကြားမှာ နစ်မြောနေတုန်း မေမေက ကျွန်တော့်ဖုန်းလာကြောင်း လှမ်းအော်တာနဲ့ အောက်ကိုဆင်းပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ်…
``သြော် ကြည်ပြာ… ဟုတ်တယ်.. ကိစ္စထူးလို့လား…´´
``ထူးတာပေါ့… ပြန်ရောက်တာ အကြောင်းမကြားတဲ့ကိစ္စ.. မနက်ဖြန်ကျောင်းရောက်တဲ့အထိမစောင့်နိုင်လို့ အခုဖုန်းဆက်ပြီး ရန်တွေ့တာ.. ကိုညို မကောင်းဘူးကွာ.. ကတိမတည်ဘူး…´´
``ဆောရီးပါဗျာ… ဆောရီးပါ… တကယ်ကို မအားတာ… လာမလို့ပဲ ဒီနေ့လည်း ကျူတိုရီယယ်ရှိနေတာနဲ့…´´
ကျွန်တော်လည်း မုသာဝါဒကံကို သူနဲ့ကျမှပဲ အလုံးအထည်နဲ့ကို ချိုးဖောက်နေမိတော့တာပဲ
``သွားပါ ပြောလိုက်ရင် ဆင်ခြေချည်းပဲ… တတ်လည်းတတ်နိုင်တယ်…´´
``အဟင်း တကယ်ပါ… ပြောတော့လည်း မယုံ…´´
``ထားပါ… တနင်္ဂနွေနေ့ ကြည်ပြာ့မွေးနေ့ အိမ်မှာ ပါတီပေးမှာ လာရမယ်နော်…´´
``ဟိုလေ… ကိုညိုက အဲ့ဒီလို ပွဲတွေ…´´
``ဟိတ်… မရဘူးနော်… မရဘူးဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်လိုဆင်ခြေမှ လက်မခံနိုင်ဘူး ဒီတစ်ခါပျက်ကွက်လို့ကတော့ တကယ်စိတ်ဆိုးပြီး အစ်ကိုအဖြစ်ကလည်း စွန့်လွှတ်မယ် … ဒယ်ဒီကလည်း စိတ်ဆိုးမှာ…´´
``အင်း ဟုတ်ကဲ့ပါ လာဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်…´´
``ကြိုးစားတာမလိုချင်ဘူး… လာဖြစ်တာပဲလိုချင်တာ you are my special one လေ မလာလို့ မရဘူးနော်… အားလုံးကို ကြေငြာထားပြီးသား ကိုညိုမလာတာဟာ ကြည်ပြာ့ကို အရှက်ခွဲတာလို့သာ မှတ်လိုက်တော့..´´
သေသာ သေလိုက်ချင်တော့တာပဲ… တကယ် ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်တောင် အနိုင်နိုင်ကို သူကတမှောင့်
``အိုခေ.. လာဖြစ်အောင်လာပါ့မယ်… ကဲ ကျေနပ်ပြီလား…´´
``အင်း ကတိနော် ဒီတစ်ခါတော့ တည်ပါစေ…´´
``အင်း ဒါဆို တာ့တာနော်..´´
``အင်း အင်း ဒါပဲနော်..´´
မနေ့က ဖြစ်ထားတဲ့ပြဿနာ အရှိန်နဲ့ ကျွန်တော်ပိုးကို ဒီနေ့လည်း စကားဟုတ်တိပတ်တိ မပြောချင်ဘူး… မပြောမဖြစ် ကားလာပြီ.. နင်အရင်တက် … ဘာစားမလဲ… တို့ဆိုတာက လွဲရင် ဟက်ဟက်ပက်ပက် မပြောဖြစ်ဘူး ညနေလည်း သူ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးပြီး ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်ကျန်နေတယ်… ကျွန်တော့်မှာ အဲ့ဒါကိုတွေးတွေးပြီးနေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နေတာ ဟိုငနဲ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ပေါ့…. ပိုးက ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်လို့အဖြေပေးခဲ့သလားဆိုတာ… ပိုး နှုတ်ကဖွင့်မပြောပေမယ့် ချစ်မှာပါ ကျွန်တော်တောင် သူ့ကိုချစ်တယ်လို့တစ်ခါမှမပြောဖူးပဲ ချစ်သေးတာပဲကို… အဟား ဒီကောင်အရူးပဲ…ပိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ကြားက သံယောဇဉ်ကို ပေါ့သေးသေးထင်လို့… အပေါ်ယံ ပါးစပ်ကပြောတာကို ဒင်းက အတည်ယူချင်သေးတာ… တော်တော်ရယ်ရတဲ့ကောင်… သူက ပိုးအကြောင်းဘယ်လောက်လို့တုန်း.. ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ ပိုး ဘယ်ဘက်ပေါင်ဘေးမှာ အစိမ်းရောင် အမှတ်ဝိုင်းလေးပါတာကအစ ကျွန်တော်သိတယ်ဗျာ…ကဲ… ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲ့လိုတွေတစ်ဖတ်သတ်ဖြည့်တွေးနေပေမယ့် ဟိုလူ့မေးခွန်းက ကျွန်တော့်ကို ခြောက်လှန့်နေဆဲပဲ… ဒါနဲ့ ကျွန်တော်နေလို့မရတော့တာနဲ့ ပိုးဆီက တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုခု သိရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပိုးတို့အိမ်ဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်… ပိုးအစ်မက ပိုးမရှိဘူး စာအုပ်ဆိုင်သွားတယ်တဲ့…. ခါတိုင်းကျွန်တော် အိမ်ကနေပဲ ထိုင်စောင့်တတ်ပေမယ့် ဒီနေ့မှ စိတ်လောနေတာမို့ စာအုပ်ဆိုင်ကို လိုက်သွားတယ်….
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားတယ်… ပိုးနဲ့ ဟိုကောင် စာအုပ်ဆိုင်ရှေ့မှာ အတူတူရပ်ပြီးစကားပြောနေပါလား… ပိုးနေ့တိုင်း စာအုပ်ငှားလိုက် ပြန်အပ်လိုက် လုပ်နေတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာနေပြီလဲ… ဒီကောင် ဒီလိုပဲနေ့တိုင်း ပိုးနဲ့ဒီမှာတွေ့နေကြလား ဒါကြောင့်ပိုးစာအုပ်ငှားတာကြာတာလား… ဒါကြောင့် ကျောင်းမှာဖမ်းလို့မမိတာလား… အတွေးတွေက ခေါင်းထဲကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို တန်းစီပြီးဝင်လာတယ်…
ငါ …ဘာလုပ်ရမလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ…စဉ်းစားစမ်း …
ကျွန်တော်ပိုးတို့အိမ်ပြန်ပြီး မမိုးကို ပိုးပိုးကိုလိုက်ကြည့်ပါဦလို့ ခေါ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပြလိုက်တယ် …
နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ရယ်လို့မောလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဂရုစိုက်မိပုံမပေါ်ဘူး… မမိုးရှက်လည်းရှက် ဒေါသလည်းထွက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုလည်းအားနာနေတယ်
``မင်းညိုရယ် နင့်ကိုအားနာလိုက်တာ… ပိုးပိုး ပိုးပိုး သိမယ်… အမျိုးတွေကို အရှက်ကွဲအောင်လုပ်ချင်တဲ့ဟာမ သိမယ်…´´
``ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကျမလဲ မမိုး…´´
``လောလောဆယ် အိမ်ပြန်မယ် … လမ်းမကြီးမှာရှင်းရင်လူသိပါတယ်… ´´
ဧည့်ခန်းမှာ နှစ်ယောက်တစ်ယောက် တစ်နေရာစီထိုင်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွေးကိုယ်စီနဲ့…
``သူတို့ အကြောင်း နင် ဘယ်လောက်သိလဲ မင်းညို…´´
မမိုးကမေးတော့ ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် အကုန်မခြွင်းမချန်ပြောပြလိုက်တယ်… ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်…
``အေး ဟုတ်ပြီ ဒီကိစ္စခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားမှဖြစ်မယ် အလောတကြီးလုပ်ရင် ပြဿနာတွေ ပိုရှုပ်ထွေးလာနိုင်တဲ့အပြင် လူသိရှင်ကြားဖြစ်ကုန်ရင် မေမေတို့ဖေဖေတို့ ဦးတို့အန်တီတို့ အားလုံးအရှက်ရကုန်လိမ့်မယ်…လောလောဆယ် နင် အိမ်အရင်ပြန်နှင့် နင်ရှိနေရင် ပိုးပိုးက ငါမေးတဲ့အခါကျ ဖြေရခက်နေလိမ့်မယ် မိန်းမချင်းချင်းကျ ပိုမေးလို့ကောင်းတာပေါ့´´
မမမိုး စီစဉ်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်… ပုံမှန်အတိုင်းထမင်းစားပြီး အိပ်ခန်းထဲ တန်းဝင်ခဲ့တာပဲ…ညကျတော့ မေမေက ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးလာခေါက်ပြီး…
``သား ပိုးပိုးနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲ…မေမေဖြင့် ရင်တွေတုန်လိုက်တာ သားရယ်… မေမေတို့လည်း ဘာမှမသိရပါလား… မမကြည်ဖုန်းဆက်ပြောမှသိတယ်… ကိုထွန်းဇော်တစ်ယောက်တော့ ဒေါသပုံထနေတယ်တဲ့… သားသိသလောက် မေမေတို့ကိုလည်း ပြောပါဦး.. ´´
မေမေက မေးတော့ ကျွန်တော်လည်း ညနေက မမိုးကိုပြောတဲ့အတိုင်း တပုံစံတည်း ပြန်ပြောလိုက်တယ် အပိုအလိုမရှိ အတတ်နိုင်ဆုံး အမှန်တရားဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ပြောပါတယ်…
``အဲ့ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ… သားက ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲ…´´
``သားက မေမေတို့ သဘောပါပဲ….´´
``ဒီလိုဆို မေမေ သားဖေဖေနဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်နော်…´´ ဆိုပြီး မေမေပြန်ထွက်သွားတယ်
ကျွန်တော့်ကိစ္စဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်လူကြီးတွေ ဆွေးနွေးတာကို ၀င်မစွက်ဖက်ချင်ပါဘူး… သူတို့က ကောင်းသလို တစ်ခုခုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်လေ… ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး ဖေဖေနဲ့မေမေ ညတွင်းချင်းပဲ ပိုးတို့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်… ပြန်လာတော့
``သား ဖေဖေတို့ အမြင်တော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲ… ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြောချင်ဘူးသားရယ်… ပြဿနာကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြီး နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ပေးလိုက်တော့မယ်…´´
``ဟုတ်တယ်သား… အစကတော့ ကျောင်းပြီးမှလက်ထပ်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပေမယ့် အခြေအနေက အခုလိုဖြစ်လာတယ်… လောလောဆယ်တော့ တရားရုံးမှာ အသိသက်သေအနေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားရုံပဲ ဧည့်ခံပွဲတော့ နောက်မှအချိန်ယူ စီစဉ်တာပေါ့… လက်မှတ်ထိုးမှာကတော့ ဒီတနင်္လာ… ရက်ရာဇာကျလို့ ရွေးထားတယ်…´´
``ဗျာ.. တနင်္လာ…´´ ကျွန်တော် ထပ်ဆင့်ဗျာပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ဘာမှကို ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်... ဒီနေ့က သောကြာ… တနင်္လာဆိုတော့ နောက် ၂ ရက်နေရင်ပေါ့…. ပိုးကို အဲ့ဒီလောက်မြန်မြန်လက်ထပ်ရလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ တွေးမထားမိဘူး…ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ဓါတ်ပုံတူတူရိုက်ပြီးမှ မင်္ဂလာဝတ်စုံဝတ်ရမယ် ထင်နေတာ… ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်လွန်းနေတယ်… ဖေဖေနဲ့မေမေရှေ့မှာ ကြာကြာဆက်မထိုင်ရဲတော့တာမို့ ကိုယ့်အခန်းထဲပဲကိုယ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်… နောက် ၂ ရက်နေရင် ပိုးက ကျွန်တော့် တရားဝင် ဇနီးမယားဖြစ်တော့မှာတဲ့… ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးကြောတွေ ရှိန်းတိမ်းဖိန်းတိမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်… ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစု ဘ၀လေးကို စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ.. အိပ်မက်ထဲမှာ…သူက ကျွန်တော့်ကို `မောင်´လို့ခေါ်တယ် …
နောက်နေ့ စနေနေ့တစ်နေ့လုံး ကျွန်တော်ပိုးတို့အိမ်မသွားဘူး… ပိုးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ ရှက်လို့… ရယ်ရတယ်နော် … မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ပိုးကဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး… ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်တာပဲသိတယ်… မေမေက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးခေါ်ကိုခေါ်သွားပြီး တနင်္လာနေ့ကျရင် ကျွန်တော်ဝတ်ဖို့တိုက်ပုံနဲ့ပိုးပုဆိုးလိုက်ရှာဝယ်ပေးတယ်… ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ပိုးပုဆိုး ၀တ်ရလို့ ကြည်နူးမိသေးတယ်… ပိုးနာမည်ပါတာကိုး…ရုတ်တရက် မနက်ဖြန် ကြည်ပြာ့မွေးနေ့ရှိတာ သတိရပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ မေမေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကျောက်စီရင်ထိုးပုံလေး ၀ယ်ခဲ့တယ်… အတွေးထဲမှာတော့ မနက်ဖြန်မွေးနေ့ပွဲကို ပိုးကိုပါ ခေါ်သွားမယ်… ဟိုရောက်ရင် ဒါမနက်ဖြန်ငါနဲ့ လက်ထက်မယ့် ဇနီးလောင်းအချောအလှလေးလို့ မိတ်ဆက်ပေးရင်း သြဘာပေးခံမယ်လို့ကြိတ်ပြီး စိတ်ကူးမိသေးတယ်… ဒါဆိုကြည်ပြာလည်း ကျွန်တော့်အပေါ်မလိုအပ်ပဲ သံယောဇဉ်တွေပိုနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ… တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ကဲ မပိုင်လား…
လေးနာရီလောက် ရေမိုးချိုးပြီး ပိုးတို့အိမ်ဘက်ထွက်လာတယ် ပိုးကိုတော့ ကျွန်တော်ဘာမှ ကြိုမပြောထားဘူး တမင်တကာ မပြောပဲထားတာ… ဖုန်းဆက်ရင် ဘယ်လိုပြောရမှန်းလဲမသိဘူး ရှိုးတိုးရှန်းတန်းကြီး… ခါတိုင်းလဲတွေ့နေကျ ပြောနေကျကို ခုမှ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မာန်တင်းပြီးထွက်ခဲ့တာ သူတို့ခြံရှေ့ရောက်တော့ ရင်အခုန်သား… ပိုးပိုး ခြံထဲက ဒန်းပေါ်မှာ တင်ပလင်ခွေထိုင်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေတယ်… ကျွန်တော့်ကို မြင်လိုက်ရတော့ သူ့မျက်လုံးတွေ ရုတ်တရက် ခက်ထန်သွားတာ ကျွန်တော် အလန့်တကြားတွေ့လိုက်တယ်…
``အိမ်ကလူတွေရော…´´ ဘာပြောရမှန်းမသိတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ပါးစပ်ထဲရှိရာ မေးလိုက်တယ်..
``သြော် ငါလည်း မနေ့က အကျီနဲ့ ပုဆိုးသွားဝယ်တယ်ဟ သိလား…´´
``ငါ အခု ဆရာ ဦးအောင်နိုင်သမီး မွေးနေ့ပွဲ သွားမလို့ နင့်ကိုလာခေါ်တာ…. ထ အ၀တ်အစားလဲ… သွားရအောင်…´´
ပိုး ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဖြတ်ခနဲ လှမ်းကြည့်တယ်… ပိုးမျက်လုံးတွေ စိမ်းနေတယ်…
``နင့်ကို ဖိတ်ထားတာ နင်သွားပါလား ဘာလို့ငါ့ကိုလာခေါ်နေတာလဲ မလိုက်ချင်ဘူး…´´
``မဟုတ်ဘူးလေ ပိုးရယ် ငါတစ်ယောက်တည်းဆို ဟိုမှာ သိတဲ့လူလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး မွေးနေ့ရှင်ကလည်း ဟိုလူ့ဧည့်ခံရ ဒီလူ့ဧည့်ခံရနဲ့ဆို ငါက ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့…´´
``သြော် အဲ့ဒီတော့ ငါက နင့်အပျင်းတော်ပြေ… လိုက်ခဲ့ပေးရမယ်ပေါ့… ငါမလိုက်ချင်ဘူး နင့်ဘာသာသွား….´´
``မဟုတ်ဘူးလေဟာ နင်ကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ အကောင်းပြောနေတာကို…´´
``ဘာ……….. ဘာပြောလိုက်တယ်… ငါ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ နင်မသိဘူးလား… ´´
``လူသတ်ချင်နေတာ… လူသတ်ချင်နေတာ… ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လှောင်အိမ်ထဲကငှက်တစ်ကောင်လို အကျဉ်းကျခံထားရပြီး အမျိုးမျိုးစေသမျှ အသုံးတော်ခံပြနေရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဒီလောက်တောင်ပေါက်ကွဲခွင့်မရှိဘူးလား…´´
ပိုးဟာ အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲတော့မယ် ဗုံးတစ်လုံးလိုပဲ… သိပ်ကို ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်… ကျွန်တော်သိတဲ့ ယုန်ငယ်လေးဟာ ကျားရဲမလေးအသွင်ပြောင်းသွားတယ်…
``နင်ဘာကို ပြောချင်တာလဲ ပိုး ငါ့ကို ရှင်းရှင်းပြော…´´
``အေး ရတယ်… သိပ်ရတယ်… ငါကလည်း ရှင်းရှင်းပဲပြောချင်နေတာ ကြာလှပြီ… နင် လုပ်ရပ်တွေက တစ်ဆိတ်အောက်တန်းမကျလွန်းဘူးလား ဟင် မင်းညို…´´
``ဟား ဟား ဘာလုပ်လို့လဲ ဟုတ်လား ရယ်ရတယ်… အေးလေ နင်က ဘာမှမလုပ်ပါဘူး ငါ့တစ်ဘ၀လုံး စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် စနက်တံလေးကို ဖြုတ်ရုံလေးဖြုတ်ခဲ့တာ…ဒီမှာ မင်းညို နင်ယောက်ျားတန်မဲ့ အဲ့လောက်တောင်အောက်တန်းကျလိမ့်မယ်လို တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး … နင်နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ရတာတောင် သနတယ်…´´
``မိပိုး နင့်စကားတွေ လွန်နေပြီနော်…´´
``လွန်ပါစေ ဘာကို ဂရုစိုက်ရမှာလဲ… မနက်ဖြန်နင်နဲ့ လက်ထက်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရတော့မယ်ဆိုမှတော့ ငါ့ဘ၀မှာ ဒီ့ထက်ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး… ဘယ့်နှယ့် ငါ ကိုလင်းထွဋ်နဲ့ စာအုပ်ဆိုင်မှာ စကားပြောတာကို မြင်ရုံနဲ့ ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင် နင့်အဖေအမေကို မိန်းမလိုမိန်းမရ ပလီပြီး ငါ့အိမ်အထိ လွှတ်ပြီး အမှုမကြီးကြီးအောင်ဆင်တာ အဲ့ဒါ အောက်တန်းမကျလို့ ဘာက အောက်တန်းကျမှာလဲ… ´´
``မဟုတ်ဘူး ပိုးပိုး နင် အထင်လွဲနေတာ ငါရှင်းပြမယ်…´´
``တော်… မကြားချင်ဘူး… နင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကား ငါဘယ်တော့မှ မယုံတော့ဘူး… မိန်းမတစ်ယောက်ရဖို့အတွက်များဟာ …´´
``ပိုး ငါ့သိက္ခာကို နင်မစော်ကားနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး နင့်မို့လို့…´´ ကျွန်တော့်စကားပင် မဆုံးလိုက်
``သြော် ဟော် ဟော် ဟုတ်တာပေါ့ ငါ့မို့လို့ပေါ့… တခြားမိန်းမ နင်အနိုင်ကျင့်သမျှအဲ့လို ငြိမ်ခံနေမလား…´´
``ငါက နင့်ကို အနိုင်ကျင့်တယ်… ဟုတ်လား ပိုးပိုး…´´
``မဟုတ်ဘူးလို့ နင်ငြင်းချင်သေးလို့လား… ဒါအခုမှ မဟုတ်ဘူး… ဟိုးလူမှန်းသိတတ်စကတည်းက… ငါ့ဘ၀ဟာ အဖေ အမေ အစ်မတွေ သြဇာအာဏာအပြင် နင့် ပုံစံခွက်ထဲမှာနေရတယ်… အတန်းဖော်ကျောင်းသားချင်းတူတူတောင် နင့် ခွင့်ပြုတဲ့လူနဲ့ပဲ ငါပေါင်းရတယ်… ကိုယ်ရတဲ့မုန့်ဖိုးနဲ့ ကိုယ်စားချင်တာဝယ်မစားရတဲ့ဘ၀… ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ် တစ်ခါမှမနေခဲ့ရတယ်ဘ၀… ငယ်ငယ်တုန်းက ငယ်သေးလို့ မစဉ်းစားတတ်သေးပေမယ့် ငါဟာ အရွယ်ရောက်လာပြီ ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ရှိတယ်… စဉ်းစားတတ်တယ် တွေးခေါ်တတ်တယ်… ခံစားတတ်တယ်… ပေါက်ကွဲတတ်တယ်… ဒါတွေ နင်မသိဘူး သိအောင်လည်း တစ်ခါမှ မကြိုးစားဘူး နင်သိတာ ငါ့ကိုမျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်မယ် ချုပ်ချယ်မယ် ကန့်သတ်မယ်.. မိဘတွေပေးထားတဲ့ အခွင့်အာဏာကိုသုံးပြီး နင် ငါ့ကို လိုရာခိုင်းမယ်…´´
ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကလွဲရင် ဘာစကားမှ ဆက်ထွက်မလာတော့ဘူး ပိုးစကားတွေက ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်
``တစ်ဦးတည်းသောသားချင်းအတူတူတောင်မှ နင်က ငယ်ငယ်ကတည်းက သူများထက်ပို အတ္တကြီးတယ်… နင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆိုရင် သေမတတ်စွဲလန်းတယ် မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံပဲ… အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ရှိတတ်တယ်… အဲ့ဒီလိုပဲ နင့်အတွက် ငါဟာ နင့်အရုပ်သာသာပဲရှိတယ်… နင် မပါပဲ ဘယ်မှ မသွားတတ် မလာတတ် ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် အစစ အရာရာ နင့်ကိုပဲ မှီခိုအားထားအောင် နင်ပြောသမျှခေါင်းညိတ်တတ်အောင် နင်ဟာ ငါ့အတွက် essential ဖြစ်အောင် … ငါ့ကို နင်ပုံသွင်းထားခဲ့တယ်… ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန် အချိန်မရွေးအိတ်ထဲက ထုတ်ကြည့်လို့ရတဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်သာသာပဲ နင်ငါ့ကို သဘောထားတယ်…´´
``မဟုတ်ဘူး ´´လို့ အကျယ်ကြီးအော်ပြီး…
``ပိုးပိုး နင့်ကိုငါတကယ်ချစ်တာ….´´ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတယ်…
``ဘာ… ချစ်တယ်.. ဟုတ်လား ဟား ဟား လောကကြီးမှာ အပြောင်မြောက်ဆုံးဟာသကိုကြားရသလိုပဲ… နင့်လိုလူက ချစ်တတ်ရင် ငါ့အသက်နဲ့တောင်လောင်းရဲတယ်… သိလား… နင့်ကိုယ်နင်ပဲ ချစ်တတ်တာပါ သူများကို ဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာ နင်မသိဘူး… အချစ်မှာ ကန့်သန့်ချုပ်ချယ်မှုတွေမရှိဘူး … နားလည်မှုပဲရှိတယ်…´´
ပိုး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး… တစ်လုံးချင်းပြောတယ်
``ကို လင်း ထွဋ်…´´
``ဟုတ်တယ် ကိုထွဋ် ပြောတာ… ပြောရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး သူက လက်တွေ့လည်း ငါ့ကိုနားလည်တယ်… လူတစ်ဖက်သားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့ သူ့စိတ်ဓါတ်ကို ငါသိပ်လေးစားတာပဲ သိလား…´´
``တော်တော့ ပိုးပိုး ဆက်မပြောနဲ့တော့…´´ ပိုးက သူ့စကားကို မရပ်ပါဘူး
``နောက်ပြီး တကယ်ချစ်ရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေ မြင့်မားနိုင်သမျှ မြင့်မားလာအောင် ကူညီလမ်းဖွင့်ပေးရမယ်တဲ့ ဘယ်လောက် လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်လဲဆိုတာ… ပြီးတော့ လှောင်အိမ်လေးထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ငါ့ကို သူ့ရဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးပြီးလွတ်လပ်မှုတွေအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့အသိုက်အမြုံလေးထဲကို ပျံသန်းခဲ့ပါတဲ့….´´
``နင်က သူ့ဆီ တကယ်သွားမှာလား ပိုး…´´ ကျွန်တော် အလန့်တကြားမေးလိုက်မိတယ်..
``အဟက်… တော်တော်ရယ်ရတဲ့မေးခွန်းပဲ… ငါပျံချင်ရင် ပျံလို့ရလို့လား လှောင်အိမ်သော့က နင်ချိုးလိုက်ပြီလေ …. မိဘစကားကိုမြေ၀ယ်မကျနားထောင်ရတဲ့ အစဉ်အလာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နင်အခုငါ့ကို ချောင်ပိတ်ရိုက်ချလိုက်ပြီပဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမေးမနေစမ်းပါနဲ့… စိတ်ချပါ… ငါနင့်ကိုလက်ထက်မှာပါ… နင့်လှောင်ချိုင့်ထဲမှာပဲ တစ်သက်လုံးနေမှာ… ငါ့အတိတ်က ၀ဋ်ကျွေးဆပ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်… နင်သာ နောက်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် ၀ဋ်မလည်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ငါဆုတောင်းတယ်…´´
``ပိုး … ပိုး… မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးနော်….´´
``နင်လည်းမွေးနေ့ပွဲသွားရဦးမယ် နောက်ကျနေရော့မယ်… ´´ ပိုးက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ် …
ကျွန်တော့်မှာသာပလက်ဖောင်းပေါ် ဦးတည်ရာမဲ့ လျှောက်ရင်း အတွေးတွေက တစ်စစီပျံ့လွင့်လို့…
၀ဋ်ကျွေး… ဒါပိုးအတွက် ၀ဋ်ကျွေးတဲ့လား…. ငါနင့်ကို အနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့လား ပိုးရယ်… နင့်အတွက်လှောင်ချိုင့်တစ်လုံတဲ့လား… ပိုး ကျွန်တော့် မေတ္တာ စေတနာတွေနဲ့ ပိုးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ တစ်ချိန်လုံး ဂုဏ်ယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော် … အခု ပိုးဘ၀ တစ်ခုလုံး စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်မိလျက်သားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာ…
ပိုးရယ် တောင်းပန်ပါတယ်… ငါ့ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့… ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး ဆိုတာတွေကိုပဲ နင့်အတွက် ဖန်တီးပေးချင်ခဲ့တာ… နင်ပြောသလို ငါအတ္တသိပ်ကြီးလွန်းခဲ့သလား… ငါမှားခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီစေတနာ အမှားအတွက် တကယ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်ပိုးရယ် … လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကိုတောင်းပန်ပါတယ်… စိတ်ချပါ ပိုး… နင် စိတ်ချမ်းသာစေရမယ်…. ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချလိုက်တယ်…
``ကလင် ကလင် ကလင်….´´
``ပိုးပိုး စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားနော်… ငါပြောတာသေချာနားထောင်…´´
``အေး ဘယ်သူ ဘာဖြစ်လို့လဲ… လန့်လိုက်တာ…´´
``မင်းညို မနေ့ညက ဆရာဦးအောင်နိုင်သမီး ကြည်ပြာ့ကို ခိုးပြေးသွားလို့…´´
မင်းနေဝေး September 1, 2009 at 8:40 PM
၀_၀ ဖတ်ရတာကောင်းတယ်နော် .....
တစ်ခုခုကို အလိုမကျသလိုပဲ ... လှောင်အိမ်ထဲကငှက်အတွက်တော့ အခန်းက ပိုလွတ်လပ်တာ ထုံးစံပါပဲလေ .... အချစ်ဆိုတာ ကိုက စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပဲ .... ဖြစ်တတ်ပါတယ် ....
littlebrook September 2, 2009 at 9:16 PM
ကောမန့်က အမြင်ကိုတောင်းတာဆိုတော့ ဇာတ်လိုက်ကတော်တော်ဆိုးတာပဲ စဉ်းစားညဏ်မရှိဘူးတောင်ပြောရမယ်
ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားတော့ တော်ပါသေးတယ် မင်းညိုစင်ဆိုတဲ့သူနဲ့မရတာ
မြစ်ကျိုးအင်း September 3, 2009 at 8:48 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့မောလာမိတယ်...။ဇာတ်သိမ်းက လွဲရင် အားလုံးကြိုက်တယ်။
ဇာတ်သိမ်းမကြိုက်တာက မိုက်မိုက်မဲမဲ ဆုံးဖြတ်သွားလို့ပါပဲ။
တကယ်ဆို အချိန်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်လေ။
မကြိုက်ပေမယ့် ဇာတ်သိမ်းရဲ့ အချိုးအကွေ့လေးမှာတော့ ဟာ ခနဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်ကောင်းတဲ့လက်ရာပါပဲ ။အားပေးပါတယ် ။ကြိုးစားပါ။
Anonymous September 4, 2009 at 12:46 AM
ဟမ်.. ဘယ်လို အဆုံးသတ်လိုက်တာလဲဗျ... ညားမယ်ထင်တာ မဆိုင်တဲ့သူနဲ့ ညားသွားတယ်... ကောင်းရော... အေးလေ.. ဒါ.. စာရေးသူရဲ့ လှည့်ကွက်ပါပဲ။တော်ပါပေ၏ အဆုံးအထိဆွဲခေါ်သွားပြီး အဆုံးကျမှ မထင်မှတ်တဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ ဆုံးလိုက်တာ ဖတ်ရသူတောင် အီလည်လည် ဖြစ်သွားတယ်..။
နေညှိ September 4, 2009 at 1:05 AM
ပာူးးးးးးးးးးး မောသွားပါသည် ............
တပုဒ်လုံး ဖြေးဖြေးးချင်း ဆွဲခေါ်သွားးပြီး ဇာတ်သိမ်းမှ တိခနဲ့ ဖြတ်ချလိုက်တယ် - - -
ရင်မောသွားတယ် .. . ပီားးး
မယ်ကိုး September 8, 2009 at 9:57 PM
စာရေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မ အဲဒီလောက် အရှည်ကြီးကို မပျင်းမရိဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်။ တကယ်ပါ။
ဇာတ်သိမ်းကို မထင်မှတ်ဘဲ ဆုံးပေးသွားတာလည်း သဘောကျမိပါတယ်။
မယ်ကိုး September 8, 2009 at 9:58 PM
စာရေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလောက် အရှည်ကြီးကို မပျင်းမရိဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်။ တကယ်ပါ။